ဗိုလ်မှုးကြီးဗထူးရဲ့သား ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးအကြောင်း | မြတ်နိုင်
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော – အပိုင်း (၁)
မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူးကို ကြားဖူး နားဝ ရှိခဲ့ကြပေမဲ့ သားဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  အကြောင်းကိုတော့ သိသူရှိ သလို မသိသူလည်း အများအပြား ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ရွံ့ မုန်းတဲ့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  ရင်နင့်စဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို စာဖတ်ပရိသတ်များအား တင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် သားကောင်းတစ်ဦး ဖက်ဆစ် စစ်ဘီလူး တွေကြောင့် အသက်ပေးခဲ့ပုံ ဖြစ်ရပ်မှန် ကိုယ်တွေ့ ဆောင်းပါးကို နောင်လာ နောင်သား မျိုးဆက်သစ်များ သိရှိနိုင်ရန် ဖြစ်ပါ တယ်။ တဆက်တည်းမှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် အသက်ပေးသွားတဲ့ ကျောင်းသား ပြည်သူ ရဟန်းရှင် လူ တပ်မတော်သား တွေရဲ့  ၀ိညာဉ်ကို ဦးညွှတ်ရင်း နိုင်ငံ့ အတွက် ကောင်းမြတ်သော စိတ်ထားဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချူပ်ငြိမ်းရေး အောင်မြင်သည့်အထိ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတွဲ ပေးပို့ ဖေါ်ပြခွင့်ပြုတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းများကို အထူး ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့  အင်အား ၀က်ဆိုဒ်မှာ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
တပ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦး ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်သည့် မင်္ဂလာဒုံဗဟိုထောက်လှမ်းရေးတပ်ဝင်းထဲရှိ ‘ရေကြည်အိုင်’ အကျဉ်းထောင်သည် အရှေ့ဘက်တွင် ထောင်ဗူး၊ မြောက်ဘက် နှင့် တောင်ဘက်တွင် အုတ်ကြွပ်မိုး တစ်ထပ်အိမ် (၅) လုံးစီရှိကြ၏။ အိမ်တစ်လုံး နှင့် တစ်လုံး အကြား ပတ်လည်တွင် ပြင်ပအား အိမ်တွင်းမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကြည့် ရှုမရနိုင်စေရန် လူတရပ်ကျော် မြင့်သည့် သစ်သားဝင်းထရံဖြင့် ကာရံထား၏။
အနောက်ဘက်တွင် သွပ်မိုး၊ သစ်သားကာ အိမ် (၆) လုံးမှာလည်း အိမ်တစ်လုံး နှင့် တစ်လုံး အိမ်ပြင်ကို မမြင်ရလေ အောင် သစ်သားဝင်းထရံဖြင့်ပင် ကာရံထားလေ၏။
တောင်ဘက်မှ အုပ်ကြွပ်မိုးအိမ်တန်း နှင့် ကိုက် (၃၀) ခန့် အကွာတွင်၊ Cell ဟုခေါ်သည့် အချုပ်ဆောင် ရှိနေလေသည်။ Cell အခန်းတခန်းသည် အရှည် (၁၀) ပေ နှင့် အကျယ် (၅) ပေသာရှိ၍၊ Cell အချုပ်ဆောင်မှာ သွပ်မိုး၊ သစ်သားကာဖြစ်ပြီး၊ Cell အခန်းပေါင်း (၂၀) ခန့် ပါရှိလေသည်။
ဤ Cell အချုပ်ဆောင်၊ အနောက်ဘက် သွပ်မိုး (၆) အိမ်တန်း၊ မြောက်ဘက်အုပ်ကြွပ်မိုး (၅) အိမ်တန်း နှင့် ထောင်ဗူးဝတို့ လေးဘက်အကြားတွင် ပေ (၂၀၀) ကျော်ပတ်လည်ကျယ်သည့် ကွင်းပြင်ရှိနေ၏။
၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု၊ သမတကြီး မန်းဝင်းမောင်၊ ပထစ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးအောင် နှင့် ဗိုလ်မင်းခေါင်၊ ဦးဝင်း၊ ဦးသွင်၊ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်ငြိမ်း နှင့် ဦးဗဆွေ၊ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင် (မြတ်ထန်)၊ မွန်ခေါင်းဆောင် နိုင်အောင်ထွန်း စသည့် ပုဂ္ဂိုလ် များ သည် ဤကွင်းပြင်တွင် လမ်းလျှောက်ကြ၏။ နံနက် (၅) နာရီမှစ၍ လမ်းလျှောက်လိုသူ တိုင်း (တစ်ကြိမ်လျှင်တစ်ဦး သာ) (၁၀) မိနစ်စီ လမ်းလျှောက်ခွင့် ရကြ၏။
ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာ အိမ်များတွင် အကျဉ်းကျနေသူများဖြစ်၏။ Cell အခန်းတွင် အကျဉ်းကျ ခံနေရသူတို့၏ဘ၀မှာမူ အရှင်လတ်လတ် ငရဲကျနေသည် နှင့် ဘာမျှမခြားပေ။
ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးတပ်တွင် Cell အခန်းများ ပါရှိသည့် အချုပ်ဆောင် (ကျနော်သိသလောက်) နှစ်ခု ရှိပါသည်။ တခုမှာ အထက်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အချုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တခုမှာ ရေကြည်အိုင်၏ အပြင်ဘက်၊ ဗဟိုထောက် လှမ်းရေးကင်းရုံ နှင့် တွဲထားသည့် အချုပ်ဆောင် ဖြစ်လေသည်။
Cell အခန်းတခုတွင် အမြင့်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ပြတင်းပေါက် တစ်ခုသာရှိပြီး၊ နေ့တွင် နေရောင် ညတွင် (လ သာသည့်အခါ) လရောင်တို့ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ အခန်း မျက်နှာကျက် တွင်ကား မှိန်ဖျော့ဖျော့ မီးသီးလေး တစ် လုံး အား အချိန်ပြည့်ဖွင့်ပေးထား၏။
အကျဉ်းသားတစ်ဦးသည် အခန်းချင်းကပ်ရက်အကျဉ်းသား နှင့် စကားခိုးပြောသည်ကို၊ အစောင့် စစ်သားက မိသွားလျှင် မအေနှမ ဆဲရေးကြိမ်းမောင်းခံရသည်သာမက၊ ကိုယ်ထိ လက်ရောက် စော်ကားခြင်း ခံကြရ၏။ ထိုမျှ နှင့် မရပ်သေး။ မသေရုံတမယ် ပေးကျွေးထားသည့် အစာရေစာ ကိုလည်း အပြစ်ပေးသည့်အနေနှင့် လျှော့ချခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့လုပ်လိုက်သေး၏။ ဤထက် ဆိုးသည်ကား မိမိ နှင့် အခန်းချင်း ကပ်ရက် အကျဉ်းသားသည် စစ်ထောက်လှမ်းရေးမှ မြှုပ်နှံထားသူ (implant) ဖြစ်လျှင်၊ မိမိမှ ထိုသူအား ယုံပြီး (မိမိအားစစ်ဆေးစဉ်က) ဖုံးထားသော သတင်း အချက်အလက်များအား ပြောမိပါက၊ ထိုသတင်းများကိုနင်း၍ နောက်ထပ်လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကာ စစ်ဆေးခြင်းပင်ဖြစ်၏။
ပုံမှန်အားဖြင့် Cell အချုပ်ဆောင်မှ အကျဉ်းသားတိုင်းသည် ကျင်ကြီး ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ထန်းရေခံသည့် မြူအိုး (မြေအိုး) သေးသေးလေး တလုံးစီပေးထား၏။ အကျဉ်းသားတို့မှ မြူအိုးအား သုံးသည့် အကျင့်မရခင်၊ ထိုင်၍အပေါ့ အပါးသွားတိုင်း အိုးကကွဲတော့၏။ တခါတရံ ကျင်ငယ်တခြား၊ ကျင်ကြီးတလွဲလည်း ဖြစ်တတ်၏။ ထို့အတွက် Cell အခန်းတိုင်းသည် နံစော်နေတော့၏။
နံနက်စောစောတွင် အစောင့်စစ်သားက တံခါးလာဖွင့်ပြီး၊ သေနတ်မောင်းကိုတင်လိုက်ပြီ ဆိုလျှင်၊ မိမိအား Cell အခန်းမှထုတ်ပြီး၊ အိမ်သာဆီသို့ ပို့ တော့မည်ဟု ဆိုလို၏။
မိမိ၏မြူအိုးကို မိမိဆွဲပြီး၊ အချုပ်ဆောင် နှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ အိမ်သာတွင် ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်ရ၏။ အနီးရှိရေ ဘုံဘိုင်တွင် ရေဆေး၊ သန့် ရှင်းရေး လုပ်ရ၏။
တနေ့ တစ်ကြိမ်သာ ရေချိုးခွင့် ရ၏။ တစ်ဦးလျှင် ရေချိုးရန် ခွင့်ပြုချိန်မှာ သုံးမိနစ်သာ ဖြစ်၏။ ရေချိုးခွင့် မရသော အကျဉ်းသားများမှလည်း ဒု နှင့် ဒေး။
ည (၁၁) နာရီကျော်၍ သန်းခေါင်ယံ နီးပြီဆိုလျှင် အကျဉ်းသားတိုင်းသည် သွေးလေခြောက်ခြား စိုးရိမ်စိတ် ကြီးမားစွာဖြင့် “ဒီည ဘယ်သူ့ အလှည့်လဲ” ဆိုသည်ကို ရင်ဖိုနေကြရ၏။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိ၏ အခန်းတံခါးကိုလာခေါက်ပါက၊ မိမိအလှည့် ဖြစ်သည်ဟု သိရသောကြောင့် ဖြစ်၏။ တံခါးခေါက်ခံရသော အကျဉ်းသားအား အကြပ်တစ်ဦး နှင့်အစောင့် စစ်သားတစ်ဦးတို့မှ လက်ထိပ်ခတ်၊ ခေါင်းကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါအုပ်ကာ ‘စစ်ဆေးရေး’ (Interrogation) လုပ်မည့်နေရာသို့ ဆွဲခေါ်သွား၏။
စစ်ဆေးသည့် နေရာတွင် ချိုချိုသာသာ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး၊ သူတို့ လိုချင်သည့် အဖြေကို မရလျှင်တော့၊ ထုံးစံ အတိုင်း ရက်စက်မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းသည့် သေလုမျောပါး ခံရသော စစ်ဆေးရေးနည်းများဖြင့် နှိပ်စက် ညှင်းပန်း လေတော့၏။
စိတ်ဓါတ် အလွန်ခိုင်မာသည့် အကျဉ်းသားဆိုလျှင် ရေရေလည်လည် ပို၍ ခံရတော့၏။ စိတ်ဓါတ် ခိုင်မာလေ၊ ခိုင်မာသော စိတ်ဓါတ်ကို ရိုက်ချိုးရန် ပို၍ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းလေ ဖြစ်၏။
ထိုသို့ လူမဆန်သည့်နည်းများဖြင့် အစစ်ဆေးခံရန် ခေါ်ထုတ်သွားသည့် အကျဉ်းသားများအား နံနက်လင်းအား ကြီး (၄) နာရီခန့် တွင် ထိုအကျဉ်းသားတို့ ၏ Cell အခန်းများထဲသို့လာပြန်ပို့ ၏။
Cell အခန်းထဲသို့ ပြန်မပို့ပဲ ကျား၊ ခြင်္သေ့တို့ကို ဆပ်ကပ်ပွဲစင်ပေါ်တွင် ထည့်လှောင်သည့် လှောင်အိမ်မျိုး များတွင် ထည့်ထားကာ၊ နေ့ရောညပါ ညှင်းဆဲနည်းပေါင်း စုံသုံးပြီး၊ နေ့စဉ် ရက်ဆက် ရက်စက်စွာ အစစ်ဆေးခံ နေရသည့် အကျဉ်းသားများလည်း ရှိ၏။ Cell အခန်းထဲသို့ ပြန်ရောက်မလာတော့ပဲ စုပ်စမြုပ်စ ပျောက်သွားသည့် အကျဉ်းသားများလည်း များစွာ ရှိခဲ့လေသည်။
အကျဉ်းသားထံမှ သူတို့ လိုချင်သောအဖြေကိုရပြီဆိုလျှင်၊ အကျဉ်းသား ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် နိုင်ငံရေး အမှု ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဦးတည်း လူခွဲ၍ချုပ်နှောင်ထားခြင်း (Solitary Confinement) သော်လည်းကောင်း၊ လေးငါး ဦးတွဲ၍ နေရာပြောင်း ချုပ်နှောင်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ကြပြန်၏။
အကျဉ်းသားများအား သုံးလေးလ တစ်ကြိမ်နေရာ ပြောင်းလေ့လည်း ရှိ၏။
Cell အချုပ်ခန်းထဲတွင် ချုပ်နှောင်ထားသူများတွင် ကုတင်၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံး ရသူများလည်း ရှိ၏။ ဘာမျှမရပဲ သံမံ တလင်းပေါ်တွင် ဒီအတိုင်း အိပ်ရသူများလည်း ရှိ၏။ အခွင့်အရေးချင်း မတူကြပါပေ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးကို လေ့လာလိုက်လျှင် ရဟန်း၊ ရှေ့ နေ၊ ကုန်သည်၊ ကျောင်းဆရာ၊ စစ်ဗိုလ်စစ်သား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ၊ ခရစ်ယန်ဘုန်းတော်ကြီး၊ ကျောင်းသား၊ အစိုးရ ၀န်ထမ်း၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ်စုများ၊ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး သမားများ စသည်ဖြင့် လူ့အလွှာ အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုနေသည့်လူပေါင်း စုံလှ၏။
သံဃာများကိုသာ ‘ထိုင်ကမုတ်’ ပေးထားပြီး၊ ကျန်လူအားလုံးမှာ ‘မြူအိုး’ ကိုသာ အားကိုးကြရ၏။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၂)
အချိန်အခါ သမယသည် ဆောင်းနှောင်းရာသီ၊ ၁၉၆၇ ခုနှစ်၏ နှစ်ဆန်းပိုင်း ဖြစ်လေသည်။ ညဉ့်နက်ပိုင်း နှင့် နံနက် စောစောပိုင်းတို့တွင် အလွန်အမင်းကြီး မအေးတော့ပါ။
ကျနော့်အား ချုပ်ထားသည့် အိမ်မှာမြောက်ဘက်အိမ် (၅) လုံးတန်းတွင် ညာဘက်မှ ပထမအိမ် ဖြစ်၏။ ထောင်ဗူးဝ နှင့် လည်း အနီးဆုံးဖြစ်၏။
Cell အခန်းများရှိရာ မြောက်ဘက်ရှိ Cell အချုပ်ဆောင် နှင့် အနောက်ဘက်ရှိ (၆) လုံးတန်းအိမ်တို့အား ခိုးကြည့်လျှင်ကောင်းစွာ မြင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ‘အကဲကြည့်နေရာ’ OP (Observation Post) ကလေးမှာ ကျနော်တို့ အိမ်၏ သစ်သားဝင်းထရံမှ အက်ကွဲနေသော နေရာလေးပင် ဖြစ်လေတော့သည်။
ထောင်ဗူးဝမှ တံခါးဖွင့်သံ၊ ပိတ်သံ၊ သော့ခလောက် ခတ်သံ၊ ဖွင့်သံများ ကြားလေတိုင်း၊ မကြာခဏ ခိုးကြည့်ကြသည်မှာ တစ်အိမ်ထဲနေ အကျဉ်းသားတိုင်း မပျက်မကွက် လုပ်ဆောင်ကြသည့် နေ့စဉ် တာဝန်ဝတ္တရား တစ်ခုပ မာ ဖြစ်လာ တော့၏။
ထောင်ထဲသို့ သွင်းလာသူ၊ ထုတ်သွားသူတို့၏ ခေါင်းများပေါ်တွင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါများနှင့် အုပ်စီးပြီးမှ အသွင်း အထုတ် လုပ်သည်ဖြစ်ရာ၊ ထိုအကျဉ်းသားသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို တပ်အပ်မပြောနိုင်သော်လည်း၊ မည်သည့်အဆောင်မှ အကျဉ်းသားကို ထုတ်သွားသည်၊ သွင်းလာသူ အကျဉ်းသားအား မည်သည့် အဆောင်သို့ ခေါ်သွားသည်တို့ကိုမူ ကျနော်တို့ တွေ့ကြရသည်၊ မြင်ကြရသည်။
ထို့ နောက် ကျနော်တို့ အကျဉ်းသား အချင်းချင်း သဘောထား အမြင်ဖလှယ်ကြပြီး၊ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်နိုင်သည်၊ မည်သည့် အရေးအခင်း၊ မည်သည့် နိုင်ငံရေးအမှု နှင့် ပတ်သက်နိုင်သည် တို့ကိုလည်း ထင်မြင်ချက် ပေးလေ့ ရှိ ကြသည်။
ကျနော်တို့ ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ မှန်သည်လည်း ရှိ၏။ မှားသည်လည်း ရှိ၏။
အချုပ်အကျဉ်းထောင်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား၊ ပန်းသတင်း လေညှင်းဆောင် လူသတင်း လူချင်း ဆောင်ကာ ကျနော် တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက် မှန်၏၊ မှား၏ များကိုသိကြရ၏။ သတင်းများသည် ငှက်များပမာ ကျနော်တို့ အကျဉ်းသား များအကြား အမြဲလို ပျံဝဲလျှက် ရှိလေသည်။
ကျနော် နှင့် အတူ တစ်အိမ်ထဲအကျဉ်းကျနေသူများမှာ ဧရာဝတီတိုင်း မင်းကြီးဟောင်း ဦးကဲရော့၊ ရေတပ်မှ ဗိုလ်မှူး ဘသော် (ဆရာမောင်သော်က)၊ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံးမှ ဗိုလ်မှူး တင်မောင်ထွန်း (CIA) သူလျှိုဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာမြင့် အမှု နှင့် ပတ်သက်သူ)၊ ဗဟိုလုံခြုံရေး နှင့် အုပ်ချုပ်မှု ကော်မီတီ (ယနေ့ခေတ် နအဖ ရုံးကဲ့သို့ တော်လှန်ရေး ကောင်စီခေတ် အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်ရုံး) ရုံးမှ ဦးလှရွှေ၊ ကုန်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ အတွင်းဝန် (ယနေ့ခေတ် ညွှန်ချုပ်ရာထူး) ဦးစိန်ကြည် တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုတစ်ညကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ကျနော် မေ့ပျောက်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
အချိန်အားဖြင့် ည (၈) နာရီခွဲသာသာခန့် သာ ရှိပါလိမ့်ဦးမည်။ လပြည့်ခါနီး လဆန်း (၁၁) ရက် (၁၂) ရက်ခန့် ဖြစ် သဖြင့် အိမ်ပြင်ဘက်တွင် လရောင်က ရွှန်းပလျှက်ရှိနေဆဲ။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်ကြပြီ ဖြစ်သည့် ဦးကဲရော့၊ ဦးလှရွှေ၊ ဦးစိန်ကြည်တိုကား အိပ်ယာသို့ စောစောဝင် သွားကြလေပြီ။ ဗိုလ်မှူးတင်မောင်ထွန်းမှာ မအိပ်သေး သော်လည်း၊ အိပ်ယာပေါ်တွင် လဲလျောင်း အနားယူ နေလေသည်။
ဗိုလ်မှူးဘသော် နှင့် ကျနော်တို့ နှစ်ဦးသာ အတွေးကိုယ်စီဖြင့် အိမ်ဝိုင်းအတွင်း လရောင် အောက်တွင် ဖြည်းဖြည်း ချင်း လမ်းလျှောက် နေကြပါသည်။
မကြာမီအချိန်လေးတွင် တောင်ဘက်ဆီမှ လူတဦးပြေးလာသည့် အသံကို ကျနော်တို့ နှစ်ဦး ကြားလိုက်ကြရလေသည်။ ကျနော်တို့၏ ကိုယ်စီကိုယ်စီ အတွေးနယ်ချဲ့ နေမှုမှာလည်း ချုပ်ငြိမ်း သွားပြီး၊ ကျနော်တို့အား ကျနော်တို့ ၏ ခြေထောက်များက ကျနော်တို့၏ ‘အကဲကြည့်’ နေရာ OP ကလေးသို့ အလိုအလျောက် ခေါ်ဆောင်သွား ကြပါတော့သည်။
ဗိုလ်မှူးဘသော်မှ တိုးတိုးလေးဆို၏ “ ဟိုမှာ…ဗိုလ်ကြီး မြင်ရဲ့လား”
“မြင်ပါတယ် ဗိုလ်မှူး၊ အစောင့်စစ်သား တစ်ယောက် တောင်ဘက် Cell အချုပ်ဆောင် ကနေ ထောင်ဗူးဝကို အ လော သုံးဆယ် ပြေးသွားနေတယ်။”
“ဟုတ်တယ် ဗိုလ်ကြီး၊ တခုခုတော့ တခုခုပဲဗျ။ ကျုပ်တို့ ဆက်ပြီး observe (အကဲကြည့်) လုပ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူး၊ ညဦးပိုင်းမှာ ဒီလိုဖြစ်တာမျိုး တခါမှမကြုံဖူးဘူး။ စစ်ဖို့ ဆေးဖို့ဆိုရင်လဲ အစောင့် စစ်သားဟာ ပြေးလွှားနေစရာမလိုဘူး”
“ဟော ဟော၊ ထောင်ဗူးဝ တံခါးပွင့်ပြီ၊ အစောင့်နဲ့ in charge (တာဝန်ခံ) နဲ့ စကားပြောနေကြပြီ”
“ဟုတ်တယ် ဗိုလ်မှူး၊ သူတို့ဟာက သုတ်သီးသုတ်ပြာပဲ။ အကျဉ်းသား တစ်ယောက်ယောက် သေကြောင်းကြံလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက် အသဲအသန် နေမကောင်းတခုခု ဖြစ်လို့ ပဲလားမသိ”
“ဖြစ်နိုင်တယ် ဗိုလ်ကြီး၊ ဒီတခါတော့ ကျုပ်တို့ရဲ့OP ကလေးကကျုပ်တို့ကို သတင်းထူး ပေးတော့မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း သည်းခံပြီး observe လုပ်ကြရအောင်”
“ကောင်းပါတယ် ဗိုလ်မှူး။ လုပ်ကြရအောင်”
ဤသို့ ကျနော်တို့ နှစ်ဦးသား နှစ်ကိုယ်ကြား လေသံလေးဖြင့် ပြောဆိုနေကြစဉ်တွင်၊ ထောင်ဗူးဝ အပြင်ဘက်၌ ကား တစီး ထိုးဆိုက်သံ ကြားလိုက်ရပါသည်။ စစ်သားရဲဘော် လေးငါးဦး ထမ်းစင် တစ်ခု ပါယူလာ၍ ထောင်ထဲသို့ ၀င်လာကြလေသည်။ သူတို့ အားလုံး တောင်ဘက် Cell အချုပ်ဆောင်ဆီသို့ အလျင်အမြန် သွားနေကြလေသည်။
သူတို့ ထောင်ဗူးဘက်သို့ ပြန်ထွက်လာကြသောအခါ ထမ်းစင်ပေါ်တွင် တစ်စုံတယောက်အား အ၀တ်ဖြင့် မျက်နှာကိုပါ ဖုံးလွှမ်းပြီး ထမ်းထုတ် လာကြသည်ကို ကျနော်တို့ မြင်တွေ့ ကြရပြန်သည်။
သူတို့ ထောင်ဗူးဝအပြင်သို့ ရောက်သွားပြီး မကြာမီပင် ကားတရှိန်ထိုး မောင်းထွက် သွားသံကိုပါ ကျနော်တို့ ကြား လိုက်ကြရပါသည်။
ထမ်းစင်ဖြင့်ခေါ်ထုတ်သွားခြင်းခံရသူ အကျဉ်းသားသည် မည်သူနည်း???
မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံသူလား၊ အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေသူလား၊ Cell အချုပ်ဆောင်တွင် အကျဉ်း ကျနေစဉ် ဤအကျဉ်းသားအား မည်သည့်အခြေအနေဆိုးများက ဤ အခြေအနေသို့ ရောက်အောင် တွန်းပို့လိုက် သနည်း၊ ထမ်းစင်ပေါ်မှာ ပါသွားစဉ် အသက်မှ ရှိသေးရဲ့လား၊ အသက်ရှင်နေ သေးလျှင်လည်း ဆေးကုသ၍ နဂိုအခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်နိုင် ပါ့မလား???
ကျနော်၏ အမေးအတွေးများကား ပြေးလွှား နေလေတော့သည်။
ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးတပ်၏ ရေကြည်အိုင် အကျဉ်းထောင်အား တိတ်ဆိတ်မှုက ပြန်လည် စိုးမိုးသွားလေပြီ။ မင်္ဂလာဒုံ ဆောင်းက ချမ်းမြမြ။ ငွေလသော်တာရောင်က ၀င်းပပ နှင့် အိမ်အပြင်တွင် ပက်ဖျန်းရွှန်းစိုနေဆဲ…။
သို့သော် ကျနော့်ရင်ထဲတွင် အဖြေရှာမရသော မေးခွန်းများဖြင့် ပြည့်လျှမ်း တင်းကြပ် တစ်ဆို့ နာကျင်နေကြဆဲ။
ကျနော်သည် ထိုညက အတော်ကြီး ညဉ့်နက်သည် အထိ အိပ်၍မရပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ပန်းသတင်း လေညှင်းဆောင်၊ လူသတင်း လူချင်းဆောင်ကာ၊ ထမ်းစင်ပေါ်က လူ နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်း ငှက်ကလေးသည် မကြာမီ ကျနော်တို့ထံ ပျံဝဲ ရောက်ရှိ လာလိမ့်မည်ဟု တွေးတော ဆင်ခြင်မိတော့မှ၊ အတော်အသင့် စိတ်သက်သာရာ ရသွားပြီး၊ မှေးစက် ပျော်သွား မိပါသတည်း။
ကျနော်တို့နှင့်အတူ အချုပ်ခံနေရသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အစ ပထမပိုင်းတွင် ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စား ကြသော်လည်း၊ ဗိုလ်မှူးဘသော် နှင့် ကျနော်တို့ကို မမှီပါချေ။ အကြောင်းသော် ကျနော်တို့ နှစ်ဦးမှာ စာရေးစာဖတ် ဘက်တွင် ၀ါသနာသန်သူများဖြစ်သည့်ပြင်၊ ထိုည၏ မြင်ကွင်းအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်လိုက်ကြရသူများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်တည်း။ ဤအချက်က ကျနော်တို့၏ တွေးတောစူးစမ်း လိုစိတ်အား အမြဲနှိုးဆွ ပေးနေလေသည်။
သို့ပါသော်လည်း ကံက ခေလွန်းလှ၏။ အနီးကပ်ဆုံး အချုပ်အိမ်များသို့ လျှို့ ဝှက် ဆက်သွယ်ပြီး၊ ဤသတင်း နှင့် ပတ်သက်၍ အနံ့ခံကြသော်လည်း ထူးထူးခြားခြား ဘာမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိပါချေ။
ကျနော်တို့ အိမ်တွင် ရှိသူတို့ကား လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့ စဉ်ကို ဖတ်ခွင့်ရကြ၏။ သို့သော် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့အပြင် တရားရုံးတော်၌ စစ်ဆေးစီရင်နေသည့် ပြစ်မှုများအနက် ရေကြည်အိုင် အချုပ်သားတို့ မသိ သင့် မသိထိုက်သောသတင်းများ ပါဝင်နေပါက၊ အမြဲတမ်းလို ဘလိတ်ဓါး ပါးပါးဖြင့် ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်ထား သည် ကို မကြာခဏတွေ့ ကြုံ ရဘူး၏။
ထိုညက မြင်ကွင်းကို တွေ့လိုက်ရပြီး နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့် အကြာတွင် လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ် သတင်းစာ၊ နာရေး ကော်လံ၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ နာရေး ကြော်ငြာအား ဘလိတ်ဓါးဖြင့် တိတိရိရိ ဖြတ်တောက်ကာ ဆင်ဆာလုပ်ထားသည်ကို ကျနော်တို့ အမှတ်မထင် တွေ့လိုက် ရပါတော့သည်။
ကွယ်လွန်သွားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤရေကြည်အိုင် အချုပ်ခန်းရှိ အချုပ်သားများ နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ အချုပ်သားတို့၏ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများ နှင့် သော်လည်းကောင်း၊ တနည်းမဟုတ် တနည်း ပတ်သက်နေသည်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ ဖြစ်ပေမည်ဟု ကျနော်တို့ မှတ်ချက် ချလိုက်ပါတော့သည်။
သို့သော် ကွယ်လွန်သူသည် မည်သူမည်ဝါ၊ မည်သည့် အချုပ်သား နှင့် ပတ်သက်နေသည် စသည်တို့ကား၊ ကျွန် တော်တို့တွေးတော စဉ်းစားမရခဲ့ပေ။
ထိုမှ တပတ်ကျော်ခန့် ကာလတွင် သတင်းအစအန ပြန့်လွင့်လာပါတော့သည်။ ကွယ်လွန်သူသည် ရေကြည်အိုင် Cell အချုပ်ခန်းတွင်းမှ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမား ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သည့် တပ်မတော် အတွင်းမှ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦး ဟူ၍တဖုံ၊ ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာမြင့် အမှုတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေသည့် အရေးကြီး ဖေါ်ကောင်တစ်ဦး ဟူ၍တမျိုး၊ ကြိုးကြားကြိုးကြား သတင်းပြန့်လွင့်နေလေသည်။ သတင်း အတိအကျမရပဲ၊ အဖြစ်မှန် ကို မဖေါ်ထုတ်နိုင်ကြသဖြင့် ကျနော်တို့ အားလုံး အားမလိုအားမရ မကျေမနပ် ဖြစ်မှု နှင့် သာ နိဂုံးချုပ် နေကြရ၏။
နေအ၀င် တိမ်အတောက် လွမ်းစရာ့ တစ်ညနေတွင် ဗိုလ်မှူးဘသော်နှင့် ကျနော်တို့ နှစ်ဦးသည် ကျနော်တို့ အိမ်ဝင်း ကလေးအတွင်း အတွေးကိုယ်စီဖြင့် ဖြည်းဆေးစွာ လမ်းလျှောက်နေ ကြလေသည်။ လမ်းလျှောက် နေရင်းမှ ဗိုလ်မှူးဘသော်၏ အတွေးသည် ထိုညက အဖြစ်အပျက် ဆီသို့ ပြန်ရောက်သွားပြန်လေသည်။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မြဲပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရာတွင်၊ မည်သည့်အခါမှ စိတ်ဒွိဟမရှိ ရဲရင့် ပြတ်သားသည့် ဗိုလ်မှူးဘသော်မှ ပြောခဲ့သည်မှာ
“ဗိုလ်ကြီး ဒီကောင်တွေကို ပီကင်းရေဒီယိုက အော်နေသလို ‘မင်းတို့ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်သိမ်း ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး’ လို့ ကျုပ် အော်ချင်တယ်။ နောက်ပြီး ဗိုလ်ကြီး၊ ကျုပ်တို့သံန္နိဌာန် တစ်ခုတော့ ချကြရအောင်။ ကျုပ်တို့ အသက်ရှင် နေသရွေ့ ဘယ်မှာပဲနေနေ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ‘လသာည’ ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှန်ကို ကျုပ်တို့ ခြေရာခံပြီး သင့်တော်တဲ့ တစ်နေ့မှာ ပြည်သူနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တင်ပြကြရအောင်”
“စိတ်ချပါ ဗိုလ်မှူး၊ ကုန်ကုန်ပြောမယ် ဗိုလ်မှူး၊ ကိုယ့်အသက်နဲ့ ကိုယ် အိုးစားမကွဲသရွေ့ ကျနော်တို့ အဖြေရှာကြမယ်လို့ သံန္နိဌာန်ချပါတယ် ဗိုလ်မှူး”
“ဟုတ်တယ်၊ ကမ္ဘာကုန် ကျယ်သရွေ့ကျုပ်တို့ အဖြေရှာကြမယ် ဗိုလ်ကြီး”
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်၏ လေသံတိုးတိုးလေးသည် လောကတခွင်သို့ ငလျင်တော်လဲသံကြီး ကဲ့သို့ရိုက်ခတ် သွားသယောင် စိတ်တွင်ခံစားလိုက်ရ၏။
ဆည်းဆာအချိန်၏ ဆောင်းနှောင်းလေနုအေးသည် ကျနော်တို့ နှစ်ဦး၏ သန္နိဌာန်အား ကမ္ဘာကုန် ကျယ်သရွေ့  သယ်ဆောင်သွားလေပြီဟု ကျနော် ရိပ်စားမိလိုက်ပါတော့သည်။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၄)
ကျနော်တို့၏အချုပ်သား အကျဉ်းသား ဘ၀သည် ရေကြည်အိုင် အချုပ်ထောင်ထဲတွင် ၀ဲဂယက်ပမာ လည်ပတ် နေပါသည်။ နံနက်စောစော ရောင်နီသမ်းလာလျှင် ကျနော်တို့၏ တစ်နေ့တာ အချုပ်သား ဘ၀စပြီး၊ နေလုံး ကြီး ပျောက်ကွယ်ချိန်၌ ထိုတစ်နေ့တာ ဘ၀ ချုပ်ငြိမ်း ပြန်လေသည်။ ရှေ့တွင် ဘာတွေဖြစ်လာမည်ကို မည်သူမှ မမှန်း ဆရဲ။ မည်သူမှမသိ။ အကြောင်းသော်ကား ကျနော်တို့ အားလုံးသည် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မပိုင်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း နှင့် ထောက်လှမ်းရေး မျက်မှန်ကြီး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦးတို့၏ အချုပ်သားများ ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်ပင် တည်း။
သို့သော် ‘အချိန် နှင့် ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်’ ဟူသော အမှန်တရား အဆိုအမိန့်သည် လူသားအားလုံး အပေါ်၌ လွှမ်းခြုံစိုးမိုး လျက်ရှိနေသည် ဆိုသည်ကို ကျနော်တို့ အချုပ်သား အားလုံး ကောင်းစွာ သဘောပေါက်မိ ကြပါသည်။
နေ့ကို လစား၊ လကို နှစ်စားကာ၊ အချိန်တို့သည် တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံး လွင့်စင် ကွယ်ပျောက် ကြကုန်၏။ အသစ် အသစ်တို့သည် အဟောင်း ဖြစ်လာကြပြီး၊ အဆုံးစွန်၌ ချုပ်ငြိမ်း ပျက်စီး ကြပြန်၏။ သင်္ခါရ နှင့် အနိစ္စတရား တို့သည်လည်း လူသားတို့၏ ဘ၀များအား အစဉ် လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင် ထားကြသည်ပင်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ နှစ်လယ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ် မတ်လခန့် တွင် သမ္မတကြီး မန်းဝင်း မောင် နှင့် ပထစ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးအောင်၊ ဗိုလ်မင်းခေါင်၊ ဦးဝင်း၊ ဦးသွင်၊ မွန် ခေါင်းဆောင် နိုင်အောင်ထွန်း၊ တည်မြဲဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သည့် ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်မြင့်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး တင်မောင် (မြတ်ထန်)၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ချာလီသိန်းရွှေ (ထောက်လှမ်းရေး) (ဇင်းမယ်တွင် စစ်သံဖြစ်နေစဉ် ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာမြင့် အမှု နှင့် အဖမ်းခံရသူ)၊ အချုပ်အိမ် တအိမ်ထဲ အတူ နေ ခဲ့ရသည့် ဗိုလ်မှူးဘသော်၊ ဗိုလ်မှူးတင်မောင်ထွန်း၊ ဦးကဲရော့၊ ဦးစိန်ကြည်၊ ဦးလှရွှေ တို့အပြင် ဗိုလ်ကြီးတင်မြင့် (လွှတ်ခါနီး နှစ်လခန့် အလိုတွင် ကျနော် နှင့် အတူ လာထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးအထူးအရာရှိ) တို့အပြင် စာရေး ဆရာမကြီး ဂျာနယ်ကျော်မမလေး အစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အင်းစိန်ထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည့် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး နှင့် အခြား စစ်ဘက်နယ်ဘက် နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း နှင့် မျက်မှန်ကြီး တင်ဦးတို့ မှ ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ကြကာ အသီးသီး ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်ပါတော့သည်။
ရေကြည်အိုင်တွင် ကျနော် ကျန်ရစ်ခဲ့သော်လည်း၊ လွတ်မြောက် သွားကြသူများအတွက် သူတို့ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး သားချင်းများ နှင့် အတူ ၀မ်းသာပီတိ ကြည်နူးမှု ဖြစ်ခဲ့မိပါသည်။ မည်သူက အချုပ်ထောင် အချုပ်ခန်းထဲတွင် မွေ့လျော်၍ တသက်လုံး နေချင်ပါအံ့နည်း။
လွတ်လပ်စွာ မွေးဖွားလာကြသူ လူသားများ ဖြစ်ကြသည့်အလျောက် လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုး တွယ်တာ ကြသည် မှာလည်း သဘာဝတရား တစ်ခုပင် ဖြစ်၏။
ကျနော် မလွတ်သေးပဲ ဘာကြောင့်ကျန်နေခဲ့ပါသနည်း။ လွတ်မြောက်သွားသူများအား မလွှတ်ခင် သုံးလခန့် အလို တွင် ကျနော်သည် အချုပ်အိမ်ထဲ၌ ကျနော် ရေးသားသည့် “မြန်မာပြည်၏ ထွက်ရပ်လမ်း” စာတမ်းအား မျက်မှန် ကြီး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦးမှ တဆင့် အာဏာသိမ်းထားသည့် တော်လှန်ရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းခဲ့၏။
ထိုစာတမ်းကြောင့် ကျနော့်အား မလွှတ်ပဲ၊ ချန်ထားခြင်းဖြစ်မည်ဟု ကျနော်တွေးမိပါသည် (ဤစာတမ်း နှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားစာတပုဒ်ရေးသားပါမည်)။
အတူနေခဲ့ဘူးသည့် သူများအား လွှတ်လိုက်သည့်နေ့မှာပင်၊ ပထမဆုံးကျနော့်အား ရေကြည်အိုင် ထောင်သို့ ခေါ်လာစဉ်က ချုပ်ထားခဲ့သည့် အိမ်ကလေးသို့ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ လိုက်ကာ တစ်ဦးတည်း ဧကစာရီ (solitary confinement) ချုပ်ထားလိုက်ပါသည်။
ကျနော်သည် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်၊ ဇွဲ နှင့် ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ရောက်လာပြီကို နားလည် နှလုံးပိုက်ထားလိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် အချုပ်အိမ်တွင်း၌ အချိန်ကို ကောင်းစွာ အသုံးချ၏။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မှန်မှန်လုပ်၏။ နေ့စဉ် (၉) ပါးသီလ ဆောက်တည်ကာ၊ တရားထိုင်၏၊ စာရေးစာဖတ် လုပ်၏။ တနေ့တော့ လွတ်ကို လွတ်ရမည်ဟု စိတ်ဓါတ်ကို မြှင့်တင်ထား၏။ တနေ့ တလံ ပုဂံ ဘယ်ပြေးလိမ့်မလဲ။
ကျနော့်အား ချုပ်ထားသည်မှာ သုံးနှစ် နှင့် ငါးလကျော်လာပြီးနောက်၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ကို ကျနော် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်ပါ။ ကျနော့်ဘ၀ခရီးတွင် ထူးခြားစွာ ကမ္ဗည်းထိုး ပေးလိုက်သည့်နေ့ ပင်တည်း။
နေ့ခင်း (၁) နာရီကျော်ခန့် တွင် ကျနော့်ဦးခေါင်းအား မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ရစ်ပတ်၍ အုပ်ပြီး၊ ကျနော့်အား လာခေါ် သွားခဲ့ကြပါသည်။ အတန်ကြာ အဆောက်အဦး တခုထဲသို့ ရောက်မှ အုပ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ဖယ်ရှား လိုက်ရာ၊ ကျနော်သည် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးတပ်၏ ရုံးခန်းတခု အတွင်းသို့ ရောက်နေသည်ကို သိရှိလိုက် ရပါသည်။
ထို့နောက် ဗဟို ထောက်လှမ်းရေး ဒု-တပ်မှူးမှ ကျနော့်အား ယနေ့မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာမှ လွှတ်ပေး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ စာတမ်းတင်ခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း နှင့် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဦးတို့မှ အထူး မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ ယခုကဲ့သို့ သူများထက် နောက်ကျ၍ လွှတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် တပ်မတော်အား ဆန့်ကျင်သည့် အရေးအသား၊ အပြောအဆို၊ လုပ်ရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုကြောင်း စသည်ဖြင့် မိန့်ချွေပြီး ကျနော့်အား အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ပို့ ပေးလေသည်။ လူ့ဘ၀သက်တမ်း တခုအတွင်း အပျော်ရွှင်ဆုံး သုံးနေ့တွင် တစ်နေ့ အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် “ထောင်မှလွတ်သည့်နေ့” ကို ကျနော် ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မည် မဟုတ်ပါ။
ထိုနေ့ကို မမေ့သလို “သူ့ ” ကိုလည်း ကျနော်ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ “သူ” ဆိုသည်မှာ ကျနော် နှင့် လူချင်း ရင်းနှီးခင်မင်လှသည့် အပြင် နိုင်ငံရေးအမြင်၊ တပ်မတော်အပေါ် အမြင်တို့တွင် တူညီကြကာ၊ တူညီသော ယုံကြည်ချက် ရှိကြသည့် ‘ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူး’ ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးသည် ထိုစဉ်က ခလရ (၂၅) မှ တပ်ခွဲမှူးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး အထက် ဗမာပြည် စစ်ရေးတာဝန်ခံ (ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သူ) မြန်မာ့သူရဲကောင်း အာဇာနည် ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူး၏ သား ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင် (ထိုစဉ်က အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဟောင်း၊ ယခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း) တို့မှ ဦးတင်မောင်ဝင်းတို့၏ ကျောင်းသားအုပ်စုများ နှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေး ကောင်စီအား တပ်တွင်းမှ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဖြင့် ဖြုတ်ချရန် ကြံစည်ခြင်း အမှု နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး နှင့် ကျနော့်အား ၁၉၆၅ ဇွန်လ ပထမပတ်ထဲတွင် အတူတကွ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်အား ရေကြည်အိုင်တွင် နေရာခွဲ၍ ချုပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ကျနော် လွတ်လာပြီး နောက်တနေ့တွင် ထိန်းသိမ်း ထားသူများအား ပြန်လွှတ်လိုက်ခြင်းကို မျက်နှာဖုံးသတင်း အဖြစ် သတင်းစာများတွင် တခမ်းတနား ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ လွတ်မြောက် လာသူ များ၏ အမည်များ ထဲ တွင် “သူ့ ” အမည်ကိုရှာဖွေကြည့်ရာ မတွေ့ ရပေ။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၅)
ထို့ နောက် ၁၉၆၇ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် လွတ်မြောက် လာသူများ ထဲတွင်လည်း “သူ” ပါမလာခဲ့ပေ။ “သူ” ပျောက်နေသည်မှာ သေချာနေလေပြီ။ ရေကြည်အိုင်တွင် ရှိစဉ်က သတင်းစာမှ နာရေးကြော်ငြာစာ တခုအား ဆင်ဆာလုပ် ဘလိတ်ဓါး နှင့် ဖြတ်တောက်ထားခြင်းကို ကျနော် သတိရနေမိ၏။ မဟုတ်ပါစေ နှင့် ၊ မဖြစ်ပါစေ နှင့် ဟု ကျနော် အကြိမ်ကြိမ် ဆုတောင်း နေမိ၏။
ကျနော်၏ဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ပါချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေကြည်အိုင်တွင် “သူ့” အား ချုပ်နှောင်ထားစဉ် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သဖြင့် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံကြီးသို့ ”သူ့” အားတင်ပို့ ကုသ ခဲ့သော်လည်း၊ “သူ” ကွယ်လွန် သွားခဲ့သည် ဟူသောသတင်းစကားများကို တဆင့်စကားများဖြင့် ကြားသိ လာခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
“သူ” သည် ဤကမ္ဘာလောကကြီး၌ မရှိရှာတော့သည်မှာ သေချာလေပြီ ဟူသောအသိတရားက ကျနော့်အား အကြီးအကျယ် တုန်လှုပ် ချောက်ချားစေ ခဲ့လေသည် သာမက၊ ခံပြင်းခြင်း၊ နာကြည်းခြင်း၊ ဆောက်တည်ရာ မရခြင်း တို့ က ကျနော်၏ စိတ် နှင့် ခန္ဓာအား ဖိစီးလေတော့၏။
ကျနော်လွတ်လာပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော်ခန့် အကြာ တစ်ရက်တွင်၊ ရေကြည်အိုင်မှာ ဘ၀တူ အချုပ်သား ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ဦးကျော်ရှင်း (အမည်ရင်းမဟုတ်ပါ) နှင့် အမှတ်မထင် ပြန်လည်ဆုံစည်း ကြပြီး၊ သူ၏ သားသမီးများ အတွက် ရှင်ပြုနားသ မင်္ဂလာပွဲကို မပျက်မကွက် လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သဖြင့်၊ ဦးကျော်ရှင်း၏ အလှူနေ့တွင် ကျနော် ရောက်ရှိသွားခဲ့၏။
ကျနော့်ကို မြင်လျင်မြင်ချင်း ဦးကျော်ရှင်းးသည် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် ဧည့်ခံ စကားပြောနေရာမှ ထလာခဲ့ပြီး၊ ကျနော့် အား ခရီးဦးကြိုပြုကာ သင့်တင့်သော နေရာတွင် နေရာချပေး၍၊ အနီးရှိ လူငယ်တဦး နှင့် ပါ မိတ်ဆက် ပေးလေသည်။ လူငယ်သည်အသက် (၂၅) နှစ်ခန့် သာရှိကာ မဖြူ မညို မပိန်မ၀ အရပ် (၅) ပေ (၂) လက္မ ခန့်ရှိ စူးရှသည့် မျက်လုံး အစုံ နှင့် ကျနော့်အား ကြည့်ရှုလေသည်။
“ဗိုလ်ကြီး၊ ဒါက ကိုအောင်သူ (နံမည်ရင်းမဟုတ်ပါ) တဲ့။ ကိုအောင်သူ၊ ဒါက ဗိုလ်ကြီးစည်သူတဲ့။ ကျနော်တို့ အားလုံး ရေကြည်အိုင်ပြန်တွေချည်းပဲ။ ကဲ ခင်ဗျားတို့ ချင်း စကားပြောကြအုံး” ဟု ပြောပြောဆိုဆို နှင့် ဦးကျော်ရှင်းသည် ကျနော်တို့ နားမှ ထွက်ခွာသွားခဲ့၏။
ကျနော့်အား စူးစိုက်ကြည့်နေသည့် ကိုအောင်သူ၏ မျက်နှာပေါ်တွင် (ဦးကျော်ရှင်းမှ ဗိုလ်ကြီး ဟုမိတ်ဆက် ပေးသွားမှုကြောင့်) စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို အထင်းသား တွေ့နေရ၏။ သူ စိတ်သက်သာ စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျနော်မှ စကားဆို လိုက်ရ၏။
“ဗိုလ်ကြီးဆိုလို့ အထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့ ကိုအောင်သူ၊ ကျနော် အခု ဗိုလ်ကြီးလဲမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျနော်လဲရေ ကြည်အိုင်မှာ သုံးနှစ်ခွဲလောက် အချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ကြည်မောင်တို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါပဲ။”
“ သြော် ဗိုလ်ကြီးက တပ်မှူးကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စကိုး။ တွေ့ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ”
“ ကိုအောင်သူရယ်၊ ဗိုလ်ကြီးတွေဘာတွေ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ အကိုလို့ ခေါ်ရင် တော်ပါပြီ”
“ဟုတ်ကဲ့ အကို၊ ကျနော်က မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါခဲ့လို့ပါပဲ။ ရေကြည်အိုင်မှာ လေးနှစ် သာသာ ငရဲခံ ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ နှစ်နှစ်က ရေကြည်အိုင် ထောင်အပြင်က Cell အချုပ်ခန်း၊ နောက် နှစ်နှစ်သာသာက ရေကြည်အိုင်ထောင်ထဲက Cell အချုပ်ခန်းမှာပါ။ ၁၉၆၉ ကုန်ခါနီးမှ လွတ်ပါတယ်”
“ရေကြည်အိုင်ထောင်ထဲက Cell အချုပ်ခန်း၊ ရေကြည်အိုင်ထောင်ထဲက Cell အချုပ်ခန်း” ဟု ကျနော် တိုးတိုးလေး ရေရွတ်လိုက်မိပါသည်။
“အကိုလဲ နည်းပေါင်းစုံ နှင့် စစ်ဆေးခံရပြီးစက အပြင်က Cell အချုပ်ခန်းမှာ နှစ်ပတ်လောက် နေလိုက်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ရက်ရက်စက်စက်စစ်တဲ့ အခါကျ အထဲက ကျားလှောင်အိမ်၊ ခြင်္သေ့ လှောင်အိမ်တွေထဲ ပြန် ရောက်သွားပြီး၊ အပြင် Cell ကိုပြန်မရောက်တော့ဘူး”
“အကိုအပြင် Cell ကို ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ၊ ကျနော်နဲ့ အခန်းချင်းဝေးတယ်နဲ့ တူတယ်။ ဒါကြောင့် မသိကြတာ။ အခန်းချင်း နီးရင် သိကိုသိကြရမှာ”
“ဖြစ်နိုင်တယ် ကိုအောင်သူ၊ အကိုက Cell မှာ နှစ်ပတ်ကျော် လောက်ပဲကြာတော့၊ သိဖို့ ကျွမ်းဖို့ အချိန်တိုနေတယ်”
ကျနော်တို့ စကားကောင်းနေစဉ် အလှူပွဲလာ ဧည့်ပရိသတ်များ တစတစများလာသည့် အပြင်၊ အလှူမင်္ဂလာ အစီ အစဉ်များလည်း စတင်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့်၊ ကျနော်တို့ စကားပြတ်သွားကြ၏။ အနီးတွင် ဧည့်သည်များ ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် အလ္လာပ သလ္လာပ သာပြောနေကြပြီး၊ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ရေကြည်အိုင်အကြောင်း မဆက်နိုင်ကြတော့။
ဦးကျော်ရှင်းအား နှုတ်ဆက်ပြီး အလှူပွဲမှအပြန် ကျနော်နှင့် ကိုအောင်သူတို့ နှစ်ယောက် ဘတ်စကား မှတ်တိုင်ဆီသို့ စကားပြောရင်း အတူ လမ်းလျှောက် လာခဲ့ကြ၏။ မှတ်တိုင်တွင် ဘတ်စကားကြဲနေပြီး၊ ကား စောင့်သူလည်း သိပ်မရှိသဖြင့် ကျနော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားဆက်ကြပြန်၏။
“ကိုအောင်သူ ကျနော့်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောရတာ အားမရသေးဘူး။ ထပ်တွေ့ပြီး စကားပြောချင်တယ်။ ခင်ဗျားဆီက သိချင်တာလေးတွေလဲ ရှိတယ်”
“ရပါတယ် အကို၊ အကိုနဲ့ စကားပြောကြည့်ပြီး အကို့ အပေါ်မှာ ကျနော်ယုံပါတယ်။ ဒါနဲ့ အကိုက ရန်ကုန်မှာ အမြဲနေလား။ ကျနော်တော့ အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး၊ ခရီးသွားနေတာများတယ်။ ဒါပေမယ့် အကိုနဲ့ ကျနော် ပြန်ဆုံ ကြအုံးမယ်လို့ ကျနော်ယုံတယ်”
“အကို့ဇနီးသည်က ရန်ကုန်မှာပါ။ အကိုလဲ တပ်ကနေ အပြင်ရောက်ပြီး ကတည်းက မေမြို့ အနီးစခန်း စည်သာ ချောင်းနံဘေးမှာ ခြံသွားလုပ်နေတယ်၊ နှစ်လ သုံးလနေရင် ရန်ကုန်ကို တခေါက်လောက် ဆင်းလာလိုက်၊ ရန်ကုန်မှာ တလကိုး သီတင်းလောက်နေလိုက်၊ အနီးစခန်း စည်သာခြံကို ပြန်တက်လိုက်ပေါ့”
“သြော် အကိုက မေမြို့ အနီး စခန်းကကိုး၊ ကျနော်လဲ အဖမ်းမခံရခင်က ကျောင်းသားနဲ့ ဘုန်းကြီး လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် အထက်မြန်မာပြည် ပခုက္ကူ၊ မန္တလေးဘက် ခဏခဏ ရောက်ပေမဲ့ သာယာလှတဲ့ မေမြို့ နဲ့တော့ နီးရက်နဲ့ဝေး မရောက်ဖူးသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်”
“ဒီလိုဆို ဒီလိုလုပ်ပါလား၊ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့။ ကိုအောင်သူ့ကို အကို့ဆီ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ကိုအောင်သူ အနားယူတဲ့ အနေနဲ့ အကို့ ခြံထဲတပတ်လောက် လာနေပါလို့။ မြန်မာပြည် အခြေအနေလဲ ဆွေးနွေးရင်း၊ အကို အင်မတန်မှ သိချင်နေတဲ့ ရေကြည်အိုင်က အဖြစ်အပျက် တခုကိုလဲ ကိုအောင်သူ သိသလောက် ပြောပြနိုင်မလားလို့ မေးကြည့်ချင်တာလဲ ပါတယ်”
“ဘာအဖြစ်အပျက်လဲအကို၊ ကျနော်သိတာဆိုရင် သိတဲ့အတိုင်း အကို့ကို အကုန် ပြောပြမယ် ဆိုတာ ယုံပါ”
“ယုံပါတယ်ဗျာ၊ သိချင်တာက ဗိုလ်မှူးကြီးဗထူးရဲ့ သား ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာပဲ”
ကိုအောင်သူသည် ကျနော့်အား တအံ့တသြ စိတ်ဝင်တစား လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး၊ ခေါင်းကို ဖြည်းညှင်းစွာ တချက် ညှိတ်လိုက်ရင်း……
“ကောင်းပြီ အကို၊ ကျနော် အခြေအနေပေးတာနဲ့ အကို့ ခြံကိုတက်လာခဲ့မယ်။ မလာခင် အကိုခြံထဲမှာ ရှိမရှိသေ ချာအောင် စုံစမ်းပြီးမှ လာချင်တယ်”
“ကျေးဇူးပဲ ကိုအောင်သူ၊ စည်သာခြံဟာ အနီးစခန်းမှာ ကိုအောင်သူကို အမြဲတမ်း စောင့်ကြိုနေတယ်”
ကျနော့်အား ဆက်သွယ်နိုင်သည့် တယ်လီဖုံးနံပါတ်၊ လိပ်စာများကို ကိုအောင်သူအား ကျနော်မှ ပေးသကဲ့သို့ ကျနော့်အားလည်း ကိုအောင်သူမှ သူ၏လိပ်စာ၊ ဖုံးနံပါတ်တို့ကို ပေးလေသည်။
ထို့နောက် မှတ်တိုင်သို့ ဘတ်စကားများ ဆိုက်ရောက် လာသဖြင့် ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် နှုတ်ဆက်ကာ၊ ဆိုင်ရာ ဘတ်စကားများပေါ်သို့ တက်လိုက်ကြပြီး လူစုခွဲလိုက်ကြပါသည်။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၆)
ကျနော်သည် ကိုအောင်သူ နှင့် ခွဲခွာပြီးနောက်၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ဆောင်းနှောင်း ရာသီပိုင်းတွင်၊ မေမြို့အနီးစခန်းရှိ “သစ္စာနွယ်” ခြံသို့ ထွက်လာခဲ့၏။ ရန်ကုန်မှ မထွက်ခွာမီ တစ်ရက်နှစ်ရက် အလိုတွင် ကိုအောင်သူ နှင့် ဖုံးအဆက်အသွယ် လုပ်ပြီး၊ ကျနော် အနီးစခန်းသို့ သွားတော့မည်ကို ကြိုတင် အသိပေးခဲ့၏။ သူကလည်း အခြေအနေပေးလျှင် ပေးသလို လိုက်လာ ခဲ့ပါမည်ဟု ကတိပြု၏။
ကျနော် “သစ္စာနွယ်” သို့ ပြန်ရောက်ပြီး ကတည်းက ခြံလုပ်ငန်းတွင် အလုပ် နှင့် လက် မပြတ်သည့် အခြေအနေ မှာ ရှိနေပါသည်။ ထို့နောက် သုံးပတ်ခန့် အကြာတွင် ကိုအောင်သူထံမှ စာတိုလေး တစ်စောင် လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။ စာထဲတွင် ခြံထဲ၌ ကျနော်ရှိမရှိ အကြောင်းပြန်ပါရန် ရေးထားသဖြင့်၊ ချက်ချင်းပင် အနီးစခန်းမှကိုအောင် သူထံသို့ ဆက်သွယ်ရာ ကျနော်ရှိနေလျှင် သူမကြာမီ ကျနော့်ထံ လာမည်ဟု အကြောင်းပြန်လေသည်။
ဖုံးဆက်ပြီး၊ သုံးရက်မြောက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီသာသာ ခန့်တွင်၊ ကိုအောင်သူ တယောက် “သစ္စာနွယ်” သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာခဲ့လေသည်။
ကိုအောင်သူ၏ အဆိုအရ ရွှေဘိုဘက်သို့ ခရီးသွားရန် အခြေအနေဖန်တီးလာသဖြင့် ရန်ကုန်မှ ထွက်လာခဲ့ပြီး၊ ရွှေဘိုသို့ ခရီးမဆက်မီ ကျနော့်ထံ အရင် ၀င်လာခဲ့ကြောင်း၊ သို့ သော်နှစ်ညခန့် သာ ကျနော့်ထံတွင် နေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ကိုအောင်သူအား လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုရင်း စည်သာချောင်းနှင့် မနီးမဝေးတွင်ရှိသည့် ကျနော်၏ အိမ်သို့ ခေါ်သွား ခဲ့ပြီး အခန်းတခန်းတွင် နေရာချပေးခဲ့ပါသည်။
ခြံအလုပ်သမားများဖြင့် ပျားပန်းခတ် အလုပ်များ နေသဖြင့် တနေကုန် ခြံလုပ်ငန်း အကြောင်းကိုသာ ကိုအောင်သူအား ရှင်းလင်းပြောပြနေပြီး၊ သူမှလည်း စိတ်ဝင်စားကာ ဗမာပြည် အေးချမ်း သာယာသွားသည့် တနေ့တွင် ခြံ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့လေသည်။
“သစ္စာနွယ်” သည် မန္တလေး-မေမြို့ ကားလမ်းမကြီးမှ ကိုက်တထောင်ခန့် အကွာ အတွင်းပိုင်း နေရာတွင် ရှိနေပြီး ထိုအချိန်က လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးပါ။ ညတွင် မှန်အိမ် သို့မဟုတ် ရေနံဆီ မီးခွက် ကိုသော် လည်းကောင်း၊ အောက်လင်းဓါတ်မီးကို သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို အသုံးပြုရပါသည်။
အိမ်အလည် ဧည့်ဆောင်တွင် အေးမြသော မိုးရာသီ နှင့် အလွန် အေးချမ်းလှသော ဆောင်းရာသီတို့တွင် အတူ စုထိုင် ၀ိုင်းဖွဲ့ စကားပြောနိုင်ရန် ထားရှိသော မီးဖိုကြီး ပတ်လည်၌ ခြံလုပ်သားများ ရှင်းသွားသည့် ည (၇) နာရီ ခန့်တွင် ကိုအောင်သူ နှင့် ကျနော်တို့ အရေးကြီးသည့် စကားဝိုင်း ဖွဲ့ရန် ထိုင်လိုက်ကြ၏။ အညာစာများဖြစ်သည့် နှမ်းပြစ်၊ မြေပဲဆားလှော်တို့နှင့် ရေနွေးကြမ်းတို့ စားရင်းသောက်ရင်း ကျနော်တို့နှစ်ဦး၏ စိတ်သဏ္ဍာန်များမှာ ရေကြည်အိုင် ထောင်သို့ ပြန်လည် ပြေးလွှားသွားနေကြပြီ ဖြစ်၏။
“ကဲ ကိုအောင်သူ၊ ဒီမှာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်နဲ့ နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ နံရံနဲ့ မျက်နှာကျက် တွေမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ နားနဲ့ မျက်စိတွေရှိတယ် ဆိုတာ ရေကြည်အိုင်မှာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ ဒီမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ရင်ထဲ စိတ်ထဲ ရှိသမျှ အားရအောင် ပြောပေတော့။ ကျနော်လဲ ခင်ဗျား ပြောပြမှာတွေ ကြားချင်လွန်းလို့ စောင့်နေတာ ကြာလှပြီ။ ဒါထက် ကိုအောင်သူ ကျနော့်ကို ယုံပါတယ်နော်”
“ကျနော် အကို့ကို ယုံပါတယ်ဗျာ။ မယုံရင် ဒီကိုဘာလို့ လာခဲ့ရမှာလဲ။ နောက်ပြီး ကျနော့်မှာ အကို့ကို ယုံလို့ ရတဲ့ အချက်ကြီးတခု ရှိနေတယ်”
“ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးက အကို့နံမည် ပြောပြသွားခဲ့တယ်။ အကိုနဲ့ သူနဲ့ဟာ တပ်မတော်ထဲမှာ ယုံကြည်ချက်ချင်း အမြင်သဘောထားချင်း တူညီတဲ့သူတွေတဲ့”
“အော်၊ သူ ဒီလို ပြောသွားခဲ့တယ်လား။ ကိုအောင်သူနဲ့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးနဲ့ အထဲမှာ ဘယ်လို တွေ့ခဲ့ကြလဲ ဆိုတာရော၊ အဲဒီတုံးက အခြေအနေတွေကိုရော ပြောပြစမ်းပါဗျာ” ဟု မီးဖိုကြီးထဲသို့ ထင်းတချောင်း ထိုးထည့်လိုက် ရင်း ကျနော်မှ စိတ်အားထက်သန်စွာ မေးလိုက်ပါသည်။
ကိုအောင်သူသည် အရှိန်ရလာသော မီးဖိုတွင်းမှ မီးတောက်မီးလျှံများကို ခေတ္တ စိုက်ကြည့်နေ လိုက်ပြီး၊ စကားကို ဆက်လေသည်။
“ရေကြည်အိုင် Cell အချုပ်ထဲမှာ တခြား အချုပ်သားတွေနဲ့ ကျနော်နဲ့ ကွာတာကတော့ ကျနော့် အချုပ်ခန်းဟာ အစွန်ဆုံး အ၀င်ဝ အခန်းဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကျနော့်ရဲ့ ညာဘက်ဘေးနှစ်ခန်းကို အခန်းလွတ်တွေပဲလုပ်ထားတယ်။ ကျနော့်ကို တခြား အချုပ်သားနဲ့ မဆက်သွယ်နိုင်အောင်ပေါ့။ မျက်မှန်တင်ဦးကြီးက ကျနော့်ကိုစိတ်ဓါတ် ပြင်းပြီး အင်မတန် ခေါင်းမာတဲ့ကောင်လို့ သတ်မှတ်လို့ ကျနော့်စိတ်ဓါတ်ကို ရိုက်ချိုးဖို့ လုပ်ထားတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေ ညသန်းခေါင်တွေမှာ ဘေးအခန်းလွတ်တွေထဲ အချုပ်သား တယောက်နှစ်ယောက် လာသွင်းထားတတ် တယ်။ နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်ကြာရင် အဲဒီအချုပ်သားတွေ ပျောက်သွားပြန်ရော”
တကယ် အချုပ်သား စစ်စစ်ပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် ထောက်လှမ်းရေးတွေပဲလား၊ ကျနော် မဝေခွဲနိုင်ဘူး။ ကျနော် သိတာကတော့ အဲဒီအခန်းလွတ်နှစ်ခုမှာ လာထားတဲ့ လူတွေဟာမမြဲဘူး။ အချုပ်ဆောင်တခုလုံး Cell အခန်းကျဉ်းလေးတွေ (၂၄) ခန်းရှိမယ်ထင်တယ်။ တဘက်ကို (၁၂) ခန်းစီနဲ့ အလယ်မှာ သုံးပေသာသာ ကျယ်တဲ့ စင်္ကြန်လမ်းရှိတယ်။ အချုပ်ဆောင်တခုလုံးရဲ့အ ပြင်ဘက် (၁၂) ပေပတ်လည်မှာတော့ Cell ထဲကအချုပ် သားတွေ အပြင်ကို မမြင်ရအောင်ရယ်၊ အပြင် အချုပ်ဆောင်က အချုပ်သားတွေလဲ Cell ထဲကလူတွေကို မမြင်ရအောင်ရယ် ရှစ်ပေ မြင့်တဲ့ သစ်သား ၀င်းထရံမြင့်မြင့်ကို ပတ်လည်ကာထားပါတယ်”
“နေပါဦး၊ အဲဒီလိုဆိုမျက်နှာသစ်ရေချိုး၊ ထုတ်တဲ့လူတွေကို Cell ခန်းထဲက ချောင်းကြည့်လို့ မမြင်ရဘူးလား ကိုအောင်သူ”
“ရပါတယ် အကို၊ Cell ခန်းတိုင်းရဲ့အ၀င်တံခါး လူတရပ်လောက် အမြင့်မှာ ခြောက်လက္မ ပတ်လည် အပေါက်က လေးတခုစီရှိတယ်။ အဲဒီအပေါက်ကနေ အစောင့်ရဲ့အလစ်မှာ ပိပိရိရိ ချောင်းကြည့်တတ်ရင်တော့ အချုပ်သားတွေရဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ အစောင့် မိသွားရင်တော့ မသက်သာဘူး အကို။ အစာလျှော့ ရေလျှော့တာကအစ ထိုးကြိတ် ကန်ကျောက်တာ အထိ ခံရတယ်”
ကျနော်မှ ကိုအောင်သူ၏ ပန်းကန်လုံးထဲသို့ ရေနွေးကြမ်း ထပ်ဖြည့်ကာ၊ နှမ်းပြစ်ပန်းကန်ကို ကိုအောင်သူ ရှေ့သို့ တိုးပေးလိုက်ရင်း “Cell ထဲ ကနေ အပြင်ကိုကြည့်ရင် အဝေးကိုနဲနဲ မမြင်ရဘူးလား ကိုအောင်သူ”
“မရဘူးအကို၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Cell ခန်း ပြူတင်းပေါက်က လူတရပ်ထက်မြင့်ပြီး၊ အချုပ်ဆောင် ပတ်လည်က ၀င်းထရံကလည်း သိပ်မြင့်နေလို့ပဲ၊ ပြူတင်းပေါက်ကို မော့ကြည့်လို့ မြင်နိုင်တာကတော့ နေ့ဆိုရင် နေရောင်၊ လသာတဲ့ညဆို လရောင်၊ ဒါပဲရှိတယ်”
“ဒါနဲ့ ကိုအောင်သူ အချုပ်ခံနေရတုံးမှာ အတူ အချုပ်ကျနေတဲ့ လူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ မသိခဲ့ရဘူးလား”
“ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ကိုယ်ရေးလက်ထောက် ဗိုလ်ကြီးကျော်စွာမြင့် ယိုးဒယားကို ထွက်ပြေးတာ ကူညီခဲ့တဲ့ပြင်သစ် ကက်သလစ် ဘုန်းကြီးတပါး၊ သခင်သာခင်ရဲ့ မြေအောက် လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတပါး၊ နိုင်ငံခြားသူလျှိုဆိုပြီး ဖမ်းထားတဲ့ ရှမ်းတရုတ်တွေ၊ ပဲခူးရိုးမ ဗကပ စစ်ဆင်ရေးမှာ ဖမ်းမိခဲ့တဲ့ ဗကပ ပါတီဝင် တချို့နဲ့ တရုတ်ကုလား စီးပွားရေးသမား တချို့ တို့ကို၊ ကျနော့်ကို ချုပ်ထားတဲ့ Cell အချုပ်ဆောင်မှာပဲ ချုပ်ထား တာကို သိခဲ့ ရတယ် အကို”
“ဒါနဲ့ကိုမြင့်ထူးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကိုအောင်သူတို့ Cell အချုပ်ထဲကိုရောက်လာတာလဲ”
“တညမှာ ကျနော်အိပ်ပျော်နေတုံး၊ မနက်တနာရီလောက် ကျနော့်ဘေးက အခန်းလွတ် Cell ခန်းကို လာဖွင့်သံကြောင့် ကျနော်နိုးလာတော့၊ အစောင့်တွေ အချုပ်သားတယောက် အဲဒီ အခန်းထဲ လာသွင်းပြီး တံခါးကို ၀ုန်းကနဲပိတ် သော့ပိတ်သွားတာကို ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ အချုပ်သားဟာ အချိန်အတော်ကြာအောင် ဘိနပ်သံ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း ခဏခဏ တောက်ခေါက်နေသံကို ကြားနေရတယ်။ ကျနော်လည်း အဲဒီ အချုပ်သားကို အရဲစွန့်ပြီး ဆက်သွယ်ချင်ပေမဲ့ သူ့အကြောင်းဘာမှ မသိရသေးတော့ မဆက်သွယ်ရဲဘူး။ အဲ သူ ကလဲ၊ ကျနော့်လို ပဲခံစားချက်ရှိဟန် တူပါတယ်။ အဲဒီညမှာ သူလဲ ကျနော့်ကို မဆက်သွယ်ဘူး”
ကိုအောင်သူ ပြောသမျှကို ကျနော်မှ စိတ်ဝင်တစား အသက်ပင်မရှုမိပဲ နားစိုက် ထောင်နေ မိပါသည်။ ကိုအောင်သူမှ စကားကိုဆက်ပါသည်။
နောက်တနေ့ မိုးအလင်းမှာ အစောင့်တွေက အချုပ်သားအသစ်ကို မျက်နှာသစ်၊ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ လာထုတ်ကြမှာပဲလို့ဆိုပြီး၊ ကျနော်ချောင်းနေပေမဲ့လဲ၊ သူ့ကို အဲဒီမနက်ပိုင်းမှာ လုံးဝ မထုတ်ကြဘူး။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း အချုပ်သားချင်း အချက်ပေးတဲ့ အန္တရယ် ကင်းပြီလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ လေချွန်သံရှည် တချက် မနက် (၁၀) နာရီ လောက်မှာ ပေါ်လာမှ သူ့အခန်းနဲ့ ကျနော့် အခန်းကြား ကျနော့် ကုတင်နဲ့ ကပ်ရက် သစ်သားကွဲအက် နေတဲ့ နံရံကြားလေးကနေ သူ့ကို ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။
“သူရောက်ပြီး နှစ်ရက်မြောက်တဲ့ ညနေခင်း၊ အစောင့်လစ်တဲ့ အချိန်မှာ၊ ကျနော့်အခန်းနံရံကို ဇွန်းနဲ့ သုံးကြိမ် အသာ အယာခေါက်ပြီး သူအဆက်အသွယ် လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း အခြေအနေကို လေ့လာပြီး ကျနော့်ကုတင်နဲ့ နံရံကြား ၀ပ်လို့ ရတဲ့နေရာကို အမြန်သွားပြီး သုံးချက်ပြန် ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ သစ်သား နံရံ အက်ကွဲနေတဲ့အပေါက် ကြားက တယောက်ကို တယောက် ချောင်းကြည့်ရင်း သူကစပြီး ထားဝယ်သံဝဲ၀ဲနဲ့ မိတ်ဆက်ပါတယ်”
ကိုအောင်သူမှ သူနှင့် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးတို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပုံ အချီအချ စကားပြောပုံ တို့ကို ကျနော့်အား စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြောပြနေပါသည်။
“ကျနော်ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးပါ။ ခြေလျင်တပ်ရင်း (၂၅) သာယာဝတီက ဖြစ်ပါတယ် – လို့ ကျနော့်ကို မိတ်ဆက်ပါတယ်၊ သူ့ကို တပ်မတော်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီ အတွေးအခေါ်ရှိသူ၊ မဆလ စနစ်အား မကြိုက်သူ၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင် တို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်တွင်းမှာ ပုန်ကန်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပြီး၊ တပ်မတော်ထဲက တခြားအရာရှိတချို့ နဲ့ အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်၊ ကျနော်ကလဲ ကျနော် အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြပြီး မိတ်ဆက်လိုက် ပါတယ်၊ ကျနော်က ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စစ်တပ်ထဲက အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ကြီး တစ်ယောက်ကို ကျနော့်ဘ၀မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ခွင့်ရတာမို့ ဂုဏ်ယူလေးစား ချီးကျူး တဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ အခါ သူက –
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်သူ၊ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဒီလိုဘ၀မျိုးရောက်လာတာ ကျနော် ၀မ်းမနည်း ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဗျာ ကျနော်မချိတင် ကဲ ဖြစ်ရတာကတော့ MI တွေဟာ တပ်မတော်ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိချင်း၊ ယူနီ ဖေါင်း ၀တ်ချင်း အတူတူကို ပိုပြီးရက်စက်ကြတယ်ဗျာ။ လူမဆန်တဲ့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းဆဲကြတယ်ဗျာ။ ဒီမိုကရေ စီဘက်တော်သားတွေ MI တွေရဲ့  ငရဲခန်းတွေမှာ ဘယ်လို ဘ၀မျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရုန်းကန် တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့ကြရတယ် ဆိုတာ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေ သိနားလည် သဘောပေါက်ပြီး၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီး ဗမာပြည်မှာ ထပ်မပေါ်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ကြဘို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကျနော် မှတ်တမ်းတင် ထားချင်တယ် – လို့ ကျနော့်ကို ပြောခဲ့တယ်၊”
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၇)
“သြော် ဗိုလ်ကြီးလည်း တော်တော်ညှင်းဆဲခံလိုက်ရတာကိုး၊ ရေကြည်အိုင် ရောက်လာတဲ့ အချုပ်သားတိုင်း မျက်မှန်ကြီးနဲ့ လက်မရွံ့ အာဏာသားတွေရဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးကို ခံကြရတဲ့ သူတို့ရဲ့ စစ်ဆေးနည်း အသစ်တွေကို အစမ်းသပ်ခံ သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်ကြရတာပါပဲ ဗိုလ်ကြီးလို့ သူ့ကိုဖြေသိမ့်တော့၊ သူက-“
“သိပ်ဟုတ်တာပေါ့ ကိုအောင်သူ၊ ကျနော် ဒီနေ့အထိ အသက်နဲ့ ကိုယ်အိုးစား မကွဲသေးတာ ကတော့ စစ်ပညာကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း သင်ယူခဲ့တဲ့ သင်တန်း အတွေ့အကြုံ၊ ငယ်ငယ်တုံးက အားကစားဘက်မှာ သန်ခဲ့တာတွေ ကြောင့်ပဲ။ ဒါတောင် သူတို့ လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်လွန်းလို့ ကျနော့် ကိုယ်ဟာ တော်တော်ချိနေပြီ။ ကျနော့်ကို ဖမ်းခါစက စစ်ဆေးရေးမစခင် တရက်နှစ်ရက် အလိုမှာ မျက်မှန်ကြီးကိုယ်တိုင် ပါးရိုက်နားရိုက်၊ လက်သီးနဲ့ ထိုး၊ စစ်ဘိနပ်နဲ့ ကန်၊ မအေနှမနဲ့ မိုးမွှန်အောင်ဆဲပြီး၊ လက်သံပြောင်ထားတော့၊ သူတပည့်တွေက ပိုပြီး ကျနော့်ကို နှိပ်ကွပ်လိုက် ကြတာပေါ့၊ ကိုအောင်သူ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့ – လို့ ကျနော့်ကို ပြောခဲ့တယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ အနောက်ဘက် ကပ်ရက်အချုပ်ခန်းက လေချွန်သံအတို နှစ်ချက်ထွက်လာတယ်၊ ဒါဟာ ဘ၀တူ အချုပ်သားချင်း အခြေအနေကို ဂရုစိုက်ဖို့ သတိပေးတဲ့ အကြောင်း ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကို ရှင်းပြပြီး၊ ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် အဆက်အသွယ်လုပ်တာကို ရပ်ခဲ့ကြတယ်”
ကိုအောင်သူသည် အချိန်အတော်ကြာအောင် မရပ်မနား ကျနော့်အား ပြောပြနေရသဖြင့် မောသွားပုံ ရပြီး၊ သူ့ရှေ့မှ လ္ဘက်ရည်ကြမ်း ပန်းကန်ကို တရှိန်ထိုး မော့သောက်လိုက်ပါသည်။ ကျနော် ကလည်း အလိုက်သိစွာ သူ၏ ရေနွေး ကြမ်းပန်းကန်ထဲသို့ ရေနွေးကြမ်း ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါသည်။ ကိုအောင်သူမှ ရေနွေးကြမ်းကို နောက်တကြိုက် ကြိုက်လိုက်ပြီး စကားဆက် ပြန်ပါသည်။
“အဲဒီနေ့၊ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျနော်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးတို့ အရမ်း ရင်းနှီးသွားကြတယ်။ အကို သိတဲ့အတိုင်း ရေကြည်အိုင် Cell အချုပ်ခန်းထဲမှာ တနေ့တာ အချိန်ကုန်လွန်ရေးဟာ နေ့တိုင်း ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ပြဿနာကြီး တခု မဟုတ်လား”
“ဟုတ်တယ် ကိုအောင်သူ၊ အကိုလဲ တဦးထဲ အချုပ်ခန်း solitary confinement ထဲမှာ အတော်ကြာနေခဲ့ရလို့ ကိုအောင်သူ ပြောတာကို ပိုပြီး သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားပြောဖို့ အခြေအနေ မပေးတဲ့ အချိန်တွေမှာဆို အချုပ်ခန်းထဲ တွေ့ရတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်၊ အိမ်မြှောင်၊ ပင့်ကူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အသေးစိပ် ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်အောင် လုပ်နေရတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်ပါဦး ကိုအောင်သူ”
“နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ဟာ အစောင့်အနေအထား၊ ရာသီဥတုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေပေါ် လေ့လာသုံးသပ်ပြီး၊ အခွင့်အရေး ရရင်ရသလို စကားခိုး ပြောကြတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ပိုပြီး သံယောဇဉ် ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ သူဟာ ဂျပန် တော်လှန်ရေး အထက်ဗမာပြည် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူးရဲ့ သားဖြစ်ပြီး၊ သူ့မှာ မိခင် ဒေါ်သိန်းတင်၊ ညီတစ်ယောက်၊ ညီမတစ်ယောက်တို့ ရှိတဲ့အကြောင်း၊ ထားဝယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အကြောင်း ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် သိပ်ရင်းနှီးလာတဲ့အချိန်ကျမှ သူကျနော့်ကို ထုတ်ပြော ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်သူ့ကို သိပ်လေးစားသွားပြီး၊ သူ့ကို ကျနော် ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့ဘူး။ သူကလဲ သူ့မှာ ကျနော်နဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်ရတဲ့ အတွက် ဆိုးတိုင်ပင် ကောင်းတိုင်ပင် တစ်ယောက် ရသလို အားတက်ရတဲ့အကြောင်း ကျနော့်ကို ခဏခဏ ပြောပါတယ်”
ကိုအောင်သူသည် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အကြောင်းကို ဆက်ပြန်ပါသည်။
“ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးဟာ သူ့ဖခင်လိုပဲ ရှေ့တန်း စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ကျတုံးမှာ ငှက်ဖျားရောဂါ ရခဲ့ပါတယ်။ ရေကြည်အိုင် ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း ငှက်ဖျားဟာ ရှင်းရှင်း မပျောက်သေး ပါဘူး။ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ တပည့်အပေါင်းရဲ့ လူမဆန်တဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးဟာ အကြောအချဉ် ကိုက်တာ၊ ဆီးအောင့်တာ၊ မျက်စေ့တို့ နားတို့ မကောင်း တော့တာ၊ ထုံတာကျဉ်တာ၊ အားကစားသမား ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ချိနဲ့ပြီး ပါးလှပ်လှပ်လေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေခံစားနေရတာကြောင့် သူဟာ ရေပိုငတ်ပါတယ်။ သူရတဲ့ရေဟာ သူ့ရောဂါတွေကြောင့် သူ့အတွက် မလောက်ပါဘူး။ ကျနော်က မြောင်းပါတဲ့ ဒန်ဇွန်း အမြီးရင်းကို နံရံ အပေါက်သေးသေးလေး ကြားကနေ သူ့ဘက်ကိုရအောင်သွင်း၊ ကျနော့်ဘက်က ဇွန်းပြား ပေါ်မှာ ရေကို ဖြည်းဖြည်းလေး လောင်း၊ ရေကမြောင်းအတိုင်း ဇွန်းရဲ့ အမြီးရင်း ကိုစီးသွားတဲ့အခါ၊ သူက ဇွန်း အမြီးအောက်မှာ ပါးစပ်ခံထားပြီး သောက်ရတဲ့နည်းနဲ့ ၊ ကျနော်က သူ့ကို ခဏခဏ ရေခိုးတိုက်ခဲ့ပါတယ်”
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ အဖြစ်ကို ကျနော့် မျက်စိထဲတွင် မြင်ယောင်လာပြီး ရင်ထဲတွင် ဆို့နင့် လာပါသည်။ ကိုအောင်သူလည်း ပြောရင်းနှင့် မျက်ရည်ဝဲကာ အံတကြိတ်ကြိတ် ဖြစ်နေပါသည်။
“ကျနော်က ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကို မျက်မှန်တင်ဦးကြီးတို့က ဘာလို့ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ရ သလဲလို့ မေးတော့၊ သူက-”
“ကိုအောင်သူ၊ ကျုပ်တို့လို တပ်မတော်ထဲက ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့လူတွေဟာ သူတို့ မဆလ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အတွက် အရပ်သား ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေထက် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးတယ်၊ ကျုပ်တို့လို လူမျိုးတွေဟာ တပ်ထဲကနေ ပြန်ပြီး ပုန်ကန်ကြမယ့် လူတွေလို့ သူ့အဖေကြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း မြင်အောင် ထင်အောင် သဘောပေါက်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မှ မျက်မှန်တင်ဦးကြီးဟာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ရသည်ထက် ရလာပြီး၊ တိုင်းပြည်မှာ ပိုပိုပြီး အာဏာရှိလာမှာ မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်မှ အခုလက်ရှိ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး နှုတ်ခမ်းမွှေး ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင်၊ ဒုညွှန်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်ခင် (လေ) တို့ကို ကျော်လွှားပြီး ရေကြည်အိုင်တပ်မှူး မျက်မှန်တင်ဦးကြီးဟာ နေရာရမှာ မဟုတ်လား။ သူ့အဖေကြီး ကလည်း တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရာ နေရာမှာရော၊ တပ်ကိုထိန်းတဲ့ နေရာမှာရော၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးကို အဓိက ဒေါက်တိုင်ကြီးအဖြစ် သုံးနေတော့၊ ခုအချိန်မှာ မျက်မှန် တင်ဦးကြီး အတွက် ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့အမှုတွေဟာ သူ့အဖေကြီးဆီမှာ အမှတ်ပြည့်ရယူရေး အသုံးချခံ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာတာ ပေါ့ဗျာ။ မျက်မှန်တင်ဦးကြီးရဲ့အဆင့်၊ သြဇာ၊ အာဏာ မြင့်တက်ရေးအတွက် ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ဟာ အနှိပ်စက်ခံ အညှင်းပန်းခံ သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်လာရတယ် မဟုတ်လား – လို့ ပြောခဲ့တယ်”
ကိုအောင်သူသည် ပြောရင်းမှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်လာပုံရပြီး ကျနော့်အား မေးပါသည်။
“အကို၊ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးက ကျနော့်ကို အကုန် ပြောပြခဲ့တာတွေ အကို့ကို ဆက်ပြောပြရင်၊ အကို စိတ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကို ဆက်ပြီး နားထောင်ချင်သေးရဲ့လား”
“ဆက်ပါ ကိုအောင်သူရယ်။ ကျနော် သူ့ အကြောင်းကို တခုမကျန် ခင်ဗျားဆီကကြားချင်ပါတယ်”
“ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးက တနေ့မှာ ကျနော့်ကို ရင်းနှီးယုံကြည်လို့ ဖွင့်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ သူအညှင်းပန်း ခံရပုံကို အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပြောပြခဲ့တယ်။ သူက-
“ကိုအောင်သူ၊ ခင်ဗျားမို့လို့ ပြောရဦးမယ်။ ကျနော့်ကို မျက်မှန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ် ပြီးတဲ့နောက်၊ သူ့တပည့် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေက ကျနော့်ကိုဆက်ပြီး လူမဆန်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ နှိပ်စက်လာကြတော့ ကျနော်က ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘွင်းဘွင်းပဲ ပြောလိုက်တယ်။
‘ကျနော် မဆလ စနစ်ကိုရော၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရော မယုံကြည်ဘူး။ ဒီစနစ် တွေဟာလည်း တိုင်းပြည်ကို ဘယ်တော့မှ အကျိုးမပြုနိုင်ဘူး။ ဗမာပြည်အတွက် ထွက်ရပ် လမ်းဟာ တစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်။ အဲဒါဟာ အများပြည်သူ နှစ်သက် လက်ခံမြတ်နိုးတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ ကျင့်စဉ်ပဲ’ လို့ပြောလိုက်တော့၊ မျက်မှန်ကြီးက သူကြားချင်တာ ဒါမဟုတ်ဘူး။ တပ်ထဲကနေ ဘယ်လို စည်းရုံးပြီး၊ ဘယ်လိုပုန် ကန်ကြမယ်၊ ဘယ်သူတွေပါတယ်၊ ဘယ်သူတွေဦးဆောင်တယ်၊ ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာပဲ ဆိုပြီး၊ ရိုက်လိုက် ထိုးလိုက် ကန်လိုက်နဲ့ မရမက မေးနေတာပဲ။ ပထမပိုင်းတော့ အစားအသောက် ကောင်းကောင်းပေးမယ်၊ နေရာ ကောင်းကောင်းမှာ ထားမယ်၊ စာဖတ်ခွင့်ရမယ်၊ အစိုးရသက်သေ ဖြစ်စေရမယ်၊ ဆိုတာတွေနဲ့ မျှား၊ သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရတော့ ဒေါသူပုန်ထပြီး ရမ်းတော့တာပဲ၊ ဖမ်းခါစမှာ ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ထားပြီး၊ သူတို့ လိုချင်တာမရတော့၊ ကျားတို့ ခြင်္သေ့တို့ ထည့်တဲ့ သံလှောင်အိမ်ထဲမှာ ထည့်တယ်။
လှောင်အိမ်ထဲမှာ ပထမတော့ အိပ်ယာတို့၊ ကုတင်တို့၊ စောင်ခေါင်းအုံးတို့ ပေးထားရာကနေ တစ်ခုစီ ပြန်သိမ်းတယ်၊ သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးရေး စာအုပ်ကြီးထဲက နည်းတွေ အတိုင်းပေါ့၊ အစာနဲ့ ရေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြတ်တောက်လာတယ်၊ နောက်ဆုံး သံမန်တ လင်းပေါ်မှာပဲ အိပ်ရတယ်၊ မျက်နှာကျက်က မီးချောင်းကလဲ ထိန်ထိန်လင်း၊ ခြင်ကလဲအလွန်ပေါဆိုတော့ ညတိုင် ဘယ်အိပ်ရမလဲ။ တခါတလေမှေးကနဲဖြစ်သွားရင် အစောင့် စစ်သား ရောက်လာပြီး မအိပ်ရအောင် သံမန်တလင်း ကိုသေနတ်ဒင်နဲ့ အဆက်မပြတ်ထုတော့တာပဲ၊ ည (၁) နာရီ လောက်ဆို မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ပတ်ပြီး အခန်းတခုထဲ ခေါ်သွားပြန်ပြီ၊ ထိုင်ခိုင်းပြီး မျက်နှာသုတ် ပုဝါကို ဖယ်လိုက်တော့ မျက်နှာကို ဆလိုက်မီးကြီးနဲ့ ထိုးတော့တာပဲ၊ ရှေ့ တည့်တည့်မှာ စစ်မယ့် ဆေးမယ့် ပါးကွက်သား နှစ်ယောက် ရှိနေပြီး၊ သူတို့ရဲ့နံဘေး ညာဘက် နံရံမှာတော့ အတွင်းကို အပြင်က မြင်ရပြီး၊ အတွင်းက အပြင်ကို မမြင်ရတဲ့မှန် (one way mirror) တပ်ထားတယ်။
အဲဒီမှန် နောက်မှာတော့ အတွင်းက ဖြစ်ပျက်သမျှကို ကြည့်ပြီး ညွှန်ကြားချက်တွေထိုင်ပေးနေတဲ့ ဆရာကြီးတွေ ရှိနေတာပေါ့။ စစချင်းတော့ ချော့မော့ပြီး ချိုချိုသာသာတွေ မေးတယ်။ ပြီးတော့ ဘီလူးခန်းဝင်လာတော့တာပဲ။ အပြောအဆိုကအစ မအေနှမချင်း မိုးမွှန်အောင်ဆဲ၊ အင်မတန် ယုတ်ရင့်ကြမ်းတမ်း အောက်တန်းကျလွန်းတယ်။
‘ဒီလောက်တောင် ခေါင်းမာတဲ့ကောင်၊ လေယာဉ်ပျံ စီးခိုင်းရမှာပေါ့ကွာ’ ဆိုပြီး၊ အပြင်ကို ဘဲလ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အထဲကို စက်ဘီးတစီး သွင်းယူလာကြတယ်။ စက်ဘီးကို ဒေါက်ထောက် ပြီးတဲ့နောက် ကျနော့်ကို စက်ဘီးပေါ် ထိုင်ခိုင်း၊ လက်နှစ်ဘက်ကို ဘေးကိုဆန့်ခိုင်းထားပြီး ခြေနင်းကို အဆက်မပြတ် နင်းပြီး စက်ဘီးစီး ခိုင်းထားတယ်။ ပါးစပ်ကလဲ လေယာဉ်ပျံ အသံနဲ့တူတဲ့ အသံကို အော်ခိုင်းလို့ အော်နေရတယ်။ ညာကွေ့ ဆိုရင် ဆန့်ထားတဲ့ ညာလက်ကို အောက်ဘက်ကို နှိမ့်ပေး၊ ဘယ်လက်ကို မြှောက်ပေးပြီး ကိုယ်ကို ညာဘက် နည်းနည်းလှည့် ပေးရတယ်။ ဘယ်ကွေ့ဆိုရင် အဲဒီရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အတိုင်းလိုက်လုပ်၊ ပါးစပ်က လေယာဉ်ပျံ အသံကတော့ မပြတ်စေရဘူး။
ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီး စက်ဘီးပေါ်က ပြုတ်ကျမှပဲ၊ လေယာဉ်ပျံ ခိုင်းတာကို ရပ်ပြီး၊ အညောင်းပြေ အကြောလျှော့ဖို့ ဆိုပြီး၊ ကလေးလို လက်နှစ်ဘက် ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကိုယ့်နားရွက် ကိုယ်ဆွဲပြီး ထိုင်ထ လုပ်ခိုင်းတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံး မလုပ်နိုင်တော့လို့ လူကလဲ ပြိုကျသွားမှပဲ ထိုင်ထ လုပ်ခိုင်းတာကို ရပ်လိုက်တယ်။ လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အနိမ့်ဆုံး ရောက်အောင်ချပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာ သိမ်ငယ်သည် ထက်သိမ်ငယ် သွားအောင်၊ သူတို့ကို ရို့ကျိုးကြောက်ရွံ့သွားအောင် လုပ်တာပါပဲ”
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၈)
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ ကိုယ်တွေ့များကို တဆင့်ပြန် ပြောပြနေသူ ကိုအောင်သူရော၊ နားထောင်နေသူ ကျနော်ပါ ရေကြည်အိုင်တွင် လူမဆန်အောင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြရသူများ ဖြစ်ရာ၊ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး မသေမီ စိတ်ရောကိုယ်ပါ မည်မျှ ခံစား သွားရသည်ကို ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် စိတ်ဝိညဉ်ချင်း ထိကပ်စွာ ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက် နားလည်နေကြပါသည်။
ထိုခေတ် ထိုအခါက မြန်မာနိုင်ငံတွင်မကြုံဘူးမကြားဘူးသေးသည့် မြန်မာအချင်းချင်း စနစ်တကျ ပြင်ဆင်၍ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းကို ခံစားသွားရသည့် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ မသေဆုံးမီ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်များအား ကိုအောင်သူမှ ဆက်ပြန်ပါသည်။
“အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ စစ်ဆေးနေတဲ့ အရာရှိတယောက်က အချက်ပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာ အစောင့်စစ်သားက ပန်ကာတစ်လုံးကို ယူလာပြီး၊ ကျနော့် ရှေ့နှစ်ပေခွဲ သုံးပေလောက် ရှိတဲ့ နေရာမှာ လာချတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ အမိန့်အတိုင်း ကျနော်ဟာ လက်နှစ်ဘက်ကိုနောက်ပစ်ပြီး ပန်ကာရှေ့မှာ ရပ်နေရပါတယ်။ အရာရှိက အမိန့်ပေး လိုက်တဲ့အခါမှာ အစောင့်စစ်သားက ပန်ကာကို အရှိန်အပြင်းဆုံး ခလုပ်မှာ ထားပြီး ဖွင့်လိုက်တယ်။ အစမှာတော့ စောစောက ညှင်းဆဲ ထားလို့ ချွေးသံတရွှဲရွှဲ ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ ပန်ကာလေအေးရဲ့အရသာကို အရူး အမူးလက်ခံနေမိတယ်။ နာရီဝက်ကျော် ကြာလာတဲ့အခါ မှာတော့ ကြက်သီးတွေထလာပြီး၊ ပန်ကာလေအေးရဲ့စူးစူးရဲရဲ အအေးဒဏ်ကို လှလှကြီး ခံရတော့တယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်တွေ လက်တွေ ရင်ဘတ်တွေ အောင့်လာ ကျင်လာ တက်လာပြီး ခြေသလုံး ကြွက်တက် လာတော့တယ်၊ အသားလတ်လတ် ဂင်တိုတို အရာရှိက ဖြောင့်ချက် မပေးရင် ပန်ကာကို မရပ်ဘူးလို့ ကျနော့်ကို မိုက်ကြည့်ကြည့်ပြီး ပြောနေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်နာရီကျော် ကြာလာတဲ့အခါမှာ ကျနော့် တကိုယ်လုံး တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်လာပြီး ဘယ်လိုမှ မဟန်နိုင်တော့ပဲ သံမန်တလင်းပေါ် ကျနော်လဲကျ သွားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာမှ ပန်ကာကို ရပ်လိုက်ကြတော့တယ်။
ကျနော့်ကို စစ်တဲ့အရာရှိက ‘ဒါ အစပဲ ရှိသေးတယ်၊ ဒီ ထက်ဆက်ပြီး ခေါင်းမာနေရင် ဒီထက်သာတဲ့ နည်းတွေနဲ့ ခင်ဗျားကိုစစ်မယ့် နက်ဖန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါတွေက စောင့်ကြိုနေတယ်၊ ဒါကို သဘောပေါက်ပြီး နက်ဖန်ည ပြန်ဆုံကြတဲ့အခါ ဖြောင့်ချက်ပေးဖို့ အသင့်လုပ်ထားပါ’ လို့ ပြောပြီး၊ ကျနော့်ကို ပြန်ခေါ်သွားဖို့ အစောင့်တွေကို အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော့်မျက်နှာကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ စည်း၊ အစောင့်က ဖျောင်းကနဲနေအောင် သေနတ်မောင်းကိုတင်လိုက်ပြီးမှ ကျနော့်ကို ပြန်ခေါ်လာခဲ့ကြတယ်”
ကိုအောင်သူမှ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ ကိုယ်တွေ့များကို အသဲလှိုက်သော အသံဖြင့် ပြောနေရာမှ ခေတ္တ နားလိုက်ပါသည်။
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ ကိုယ်တွေ့ပြောပြချက်များအား တဆင့်ပြန် ပြောပြနေသူ ကိုအောင်သူသည် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး နှင့် ရေကြည်အိုင်ကို စိတ်အာရုံထဲတွင် လုံးဝ နှစ်ထားပြီး ခံစားချက် အပြည့် နှင့် ပြောပြနေသည်များ ဖြစ်ရာ၊ ကျနော်သည် မိမိကိုယ်တိုင် ရေကြည်အိုင်ပြန် ဖြစ်သည်ကို မေ့လျော့နေပြီး၊ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးမှ ဝေဒနာများ မချိမဆန့် ခံစား သွားရသည်ကို မြင်ယောင်ကာ စုပ်တသတ်သတ်နှင့် နားထောင်နေမိ၏။
ကိုအောင်သူသည် ရေနွေးကြမ်းကို တချက် မော့သောက်လိုက်ပြီး ကျနော့်အား စေ့စေ့ကြည့်ကာ
“အကိုက ကျနော့်ကို ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ပြောသွားသမျှ အကုန်လုံး တခုမကျန် သိချင်တာဆိုတော့ ကျနော် ဘာမှမချန်ပဲ ဆက်ပြောပါ့မယ်၊ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ကျနော့်ကိုမှာသွားသလိုသာ အခုလို ရက်စက်မှုကမ်းကုန်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြီး ဗမာပြည်မှာ ထပ်မပေါ်အောင် တနေ့ ကျရင် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို တိုင်းပြည်ကသိ အောင် မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ထုတ်ပေးပါ အကိုရာ”
“အဲဒီအတွက်ပဲ ကိုအောင်သူကို ကျနော်ကအရမ်းတွေ့ ချင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ”
“အဲဒီညက ပန်ကာလေနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ ငရဲခန်းအပြီးမှာ၊ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ကျနော့်ကို ပြောပြတာက – ကျနော်က လမ်းမလျှောက် နိုင်တော့တဲ့အတွက် ပါးကွက်သားနှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို တွဲခေါ်လာပြီး ကျားခြင်္သေ့ ထည့်တဲ့ လှောင်အိမ်ထဲ ပြန်သွင်းလိုက်တယ်၊ ကျနော်လဲ သံမန်တလင်းပေါ် တုံးကနဲလဲကျသွားပြီး ချက်ချင်းလို အိပ်ပျော် သွားတယ်။ နောက်တနေ့ ကျနော်နိုးလာတော့ ကျနော့်အတွက် အစားအသောက်တွေ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာနဲ့ ပိုပိုလျှံလျှံ ရောက်လာတယ်၊ သိမ်းသွားတဲ့ ကုတင်၊ အိပ်ယာ၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်တွေ ပြန်ရောက်လာတယ်။ ညနေပိုင်းမှာ ကျနော့်ကို ရေချိုးထုတ်တယ်၊ အစောင့်လုပ်တဲ့လူရဲ့ မျက်နှာထားတို့ ပြောပုံဆိုပုံ တွေကပါ ချိုသာနေတယ်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မယုံနိုင် ဖြစ်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒါတွေဟာ မုန်တိုင်းမကျခင် လာနေတဲ့လေပြေတွေဆိုတာ နောက်သုံးရက်မြောက်ညမှာ သိရပါတော့တယ်။ နှစ်ညနဲ့တရက် ကောင်းကောင်း အနားရ၊ ကောင်းကောင်းစားရလို့ ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ ထူထူထောင်ထောင် ဖြစ်နေတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် သတိထား မိတယ်။ အမှန်ကတော့ သူတို့ စိတ်ကြိုက် ထပ်ပြီးနှိပ်စက်နိုင်အောင် ကျနော့်ကို ကျကျနန အားမွေးပေး ထားတာကိုး။ အဲဒီ သုံးရက်မြောက် ညသန်းခေါင်လောက်မှာ ထုံးစံအတိုင်း ကျနော့်ကို လက်ထိပ်ခတ်၊ မျက်
နှာကို အ၀တ်စည်းပြီး ခေါ်ထုတ်သွားကြတယ်။
သူတို့ ရဲ့အခန်းထဲ ရောက်တော့ ကျနော့်ကို သူတို့ ထဲက အရာရှိတယောက်က၊ အမှန်အတိုင်း ဖြောင့်ချက်ပေးရင် အထက်လူကြီးတွေက ကျနော့်ကို အစိုးရ သက်သေ အဖြစ် ထားပေးမယ့် အကြောင်း၊ လူကြီးတွေ ရဲ့စေတနာကို လေးစားပြီး သူတို့ကို ကူညီဖို့ အကြောင်း၊ အဖြစ်မှန်ကို သူတို့ အနေနဲ့ အစစအရာရာ သိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ အနာမခံဖို့ အကြောင်းတွေ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတ၀က် သတိပေးခြင်းတပိုင်းနဲ့ ပြောလာပါတယ်။ ကျနော်က ကျနော် သိသမျှရော ကျနော့် သဘောထားတွေကိုပါ ပြောပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှထပ်ပြော စရာမရှိတဲ့ အကြောင်း၊ ဒါကို မကျေနပ်လို့ ကျနော့်ကို ထပ်နှိပ်စက်ဦးမယ်ဆိုရင်လဲ ခံရမှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောလိုက်တော့၊ ကျနော့်ကို စစ်နေတဲ့ ဂင်တိုတို အသားလတ်လတ် အရာရှိဟာ မျက်နှာမှာ ဒေါသတွေ ပြည့်လျှမ်းသွားပြီး သူ့ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းနေပါတယ်။
‘ကဲ ဒီလိုဆို လုပ်ငန်းစဖို့ပဲ ရှိတယ်’ လို့ သူကဆိုပြီး၊ အစောင့်နှစ်ယောက်ကို အချက်ပြ လိုက်တဲ့အခါ ခုံတန်းရှည် တခုကို အခန်းထဲ သွင်းလာကြပါတယ်။ ကျနော့်ကို ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းဆန့်ပြီး ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ခြေကျင်းဝတ် နှစ်ဘက်ကို ကြိုးနဲ့တင်း နေအောင်ချည်ပြီး၊ အပေါ်ကနေ သားရေကြိုး ပြားပြားထူထူ တချောင်းနဲ့ ခုံတန်းရှည်နဲ့ပါ ရစ်ပတ်ပြီး ချည်ထားပြန်ပါတယ်။ ကျနော့် ညို့သကြီး နှစ်ဘက် ပေါ်မှာတော့ အ၀တ်စပါးပါးကို ရေဆွတ်တင်ထားကြပါတယ်။ ကျနော့် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုပါ ခုံတန်းရှည်ပေါ် လှဲချလိုက်ပြီး ရင်ဘတ်တွေ လက်တွေကို ခုံတန်းရှည်နဲ့ တင်းနေအောင် ကြိုးချည်လိုက်ကြပါတယ်။
စစ်နေတဲ့အရာရှိက ခေါင်းညှိမ့်ပြလိုက်တဲ့ အခါမှာ အစောင့်တယောက်က လုံးပတ် နှစ်လက်မလောက် အရှည်နှစ် ပေခွဲလောက်ရှိတဲ့ သစ်သားမျဉ်းလုံးကို ကျနော့်ညို့ သကြီးပေါ်က အ၀တ်စပေါ်မှာ တင်ပြီး မျဉ်းလုံးရဲ့ တဘက်ကို ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ နောက်အစောင့် တယောက်ကပါ မျဉ်းလုံးရဲ့ ကျန်တဲ့တဘက်ကို ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကို ရတဲ့ အလစ်လေးမှာ လှန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့်ကို ရဲရဲပြန်မကြည့်ရဲပဲ မျက်နှာတွေကို လွှဲလိုက်ကြ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ရီဝေေ၀ ဖြစ်နေတာကြောင့်၊ ရဲဆေးတင် အရက် သောက်ထား ကြတာကို အရက်နံ့တွေနဲ့ အတူ ကျနော်သတိထားလိုက်မိတယ်။
MI ရဲဘော်နှစ်ယောက်ဟာ ပထမတော့ လက်အားနည်းနည်း၊ ကိုယ်အားနည်းနည်းနဲ့ မျဉ်းလုံးကို အထက်အောက် အစုန်အဆန် လှိမ့်နေပါသေးတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက် ဖိအား၊ ကိုယ်ဖိအားတွေကို မြှင့်ပြီး အပြန်အလှန် လှိမ့်လိုက်ကြတာ၊ ကျနော့်အသားထဲမက အရိုးထဲ ထိအောင် အခံ ရခက်အောင်နာတဲ့အတွက် အံကို တင်းတင်းကြိတ် ထားတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အံမခဲနိုင်တော့ပဲ အဖေ အမေတပြီး အော်ရတော့တယ်။ ညို့သကြီးတွေဟာ ပူစပ်ပူလောင်နဲ့ ကြေမွသွားသလို စိတ်ကထင်မိတယ်။ နာရီဝက်လောက် ကြာတော့မှ အသားညိုညို ခပ်ပိန်ပိန် မျက်မှန်နဲ့ အရာရှိတယောက်က မျဉ်းလုံးလှိမ့်တာကို ရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဂင်တိုတိုအရာရှိကတော့ ကျနော့်ကို မကျေနိုင်မချမ်းနိုင် မျက်နှာနဲ့ ကြည့်နေပါတယ်။ အစောင့် တယောက် ညို့သကြီးပေါ်က အ၀တ်စကို ဆွဲလှန်လိုက်တဲ့အခါ အညိုအမဲတွေ သွေးချဉ်းချဉ်း နီနေတာတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီညဟာ ရေကြည်အိုင်မှာ ပထမဆုံး ကျနော့် သွေးမြေကျတဲ့ ညမို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဗျာ။ မျဉ်းလှိမ့်တာကို ရပ်ပြီး တဲ့နောက်၊ ညိုညိုပိန်ပိန် အရာရှိက တာဝန်အရ လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ရတဲ့နည်းနဲ့ စစ်လို့ အထက်က အမိန့် ပေးထားလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ ဆက်ပြီး “ဘူး” ခံနေရင် ပိုနာမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း လေအေးအေးနဲ့ကျနော့်ကို ပြောနေပါတယ်။
ကျနော်က ကျနော်သိတာကို သိသလို ပြောပြီးပြီ၊ မသိတာကို သိသလိုလို လည်ဆည်ပြီး ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဘာကို သိချင်တယ်ဆိုတာ ဒဲ့ဒိုး မေးဖို့နဲ့ သိရင်သိတာ ကိုဖြေမယ့် အကြောင်းပြန်ပြော လိုက်တဲ့အခါ ညိုညိုပိန်ပိန် အရာရှိက အစောင့် နှစ်ယောက်ကို လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တဲ့ ကျနော့်ကို တွဲခေါ်လာခိုင်းပြီး၊ သူတို့ ရှေ့ကကုလား ထိုင်မှာ ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ဂင်တိုတို အရာရှိကတော့ ဒေါသမီးဟုန်းဟုန်း တောက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။
မကြာခင်မှာပဲ ကျနော့်ရှေ့ က စားပွဲပေါ်မှာ ရေ၊ ကော်ဖီ၊ ကိတ်မုံ့ ၊ စီးကရက်တို့ ရောက်လာတယ်။ ကျနော်က ရေကို နှစ်ဖန်ခွက်လောက် အားရပါးရသောက်၊ ကော်ဖီကိုလဲသောက် လိုက်တော့ သူတို့က စီးကရက် တလိပ်ကိုပါ မီးညှိပြီး ပေးလာတယ်။ ကျနော် စိတ်ရှိလက်ရှိ ဖွာပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့က စစ်ဆေးနည်း ပြောင်းပြန်ပြီလေ။ ညိုညိုပိန်ပိန် ပုဂ္ဂိုလ်က ကျနော်နဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်၊ သခင်သာခင်တို့နဲ့ ဘယ်လို အဆက်အသွယ်ရှိတယ်၊ တပ်ထဲကနေ ဘယ်လိုပုန်ကန်ဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိလဲ လို့ မေးပြီးသားတွေကိုပဲ လေအေးလေးနဲ့ မေးပြန်တယ်။
ကျနော်က အဲဒီတပ်မှူးကြီးတွေ ဘာစီစဉ်တယ်ဆိုတာ ကျနော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ သခင်သာခင်ကိုလဲ ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ကျူတာကို ချစ်မြိုင်တို့က တဆင့် အသိ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တခါမှ သခင်သာခင်နဲ့ စကားစမြည်ဆွေးနွေး တာမျိုးမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း အပ်ကြောင်း ထပ်နေတဲ့ အဖြေကိုပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ညိုညိုပိန်ပိန် အရာရှိက ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ နားထောင်နေပြီး ဂင်တိုတို ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ဒေါသတကြီး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာအစောင့် တယောက်ဟာ အပြင်ကနေ စာရွက်တရွက် ကိုင်ပြီး အခန်းထဲကို ၀င်လာတယ်။
ဂင်တိုတို ပုဂ္ဂိုလ်က စာကိုဖတ်ပြီး အားရကျေနပ်သွားတဲ့ပုံနဲ့ ပြုံးနေတယ်။ One way mirror နောက်ကနေ အခန်းထဲကို ကြည့်နေတဲ့ ဆရာကြီးတွေက နောက်ထပ် အမိန့်အသစ်တခု ပေးလိုက်တာပဲ ဆိုတာ ကျနော် သိလိုက်တယ်။ အဲဒီကစပြီး ကျနော့်ကို စစ်ဆေးတာမှာ ညိုညိုပိန်ပိန် အရာရှိရဲ့ကဏ္ဍပြီးသွားပြီး၊ ဂင်တိုအရာရှိကပဲ စစ်ဆေးရေးကို ကိုင်တော့တယ်။
သူကတချက် မဲ့လိုက်ပြီး ကျနော့်ကို ‘ခင်ဗျား သက်သက်မဲ့ လိမ်နေတာပဲ၊ သခင်သာခင်နဲ့ သိပြီးတော့မှ တပ်ထဲကနေပြန်ချမယ့် အစီအစဉ်တွေ မသိဘူးဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူများ ကိုပဲ လိမ်လို့ရမယ်။ ကျုပ်တို့ MI ကို လိမ်လို့မရဘူး၊ ကြာတယ်၊ တပ်ထဲမှာ ဘာတွေလုပ်ဖို့ လုပ်ထားတယ် ဆိုတာ ပြောမလား မပြောဘူးလား၊ ဒါကိုပဲဖြေ’ ဆိုပြီး လုပ်လာပြန်တယ်။
ကျနော်က ‘ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်တာသာလုပ်၊ ကိုယ်မသိတာကို ဘယ်လိုလုပ် ဘာသွားပြောရမှာလဲ၊ တနေ့ကျရင် ကျနော် မသိဘူး ဆိုတာ မှန်တဲ့အကြောင်း ခင်ဗျားတို့ သိလာလိမ့်မယ်’ လို့ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ဖို့ သန္နိဌာန်ချထားတဲ့ ဂင်တိုတို အရာရှိက ရဲဘော် တယောက်ကို ဆက်လုပ်လို့ အမိန့်ပေး လိုက်တဲ့အခါ၊ ညိုညိုပိန်ပိန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကျနော့်ကို မကြည့်တော့ပဲ၊ မျက်နှာကျက်ကိုပဲ ကြည့်နေတယ်။
အခန်းထဲကို ရဲဘော် တယောက်က ဒိုင်နမိုတလုံးနဲ့ ၀ါယာကြိုးတွေယူလာပြီး၊ ၀ါယာကြိုး အမျှင်တွေကို ဖွာနေအောင် လုပ်လိုက်ပြီးမှ၊ ကျနော့်လက်ချောင်းတွေ ခြေချောင်းတွေကို ၀ါယာကြိုးမျှင် တခုစီနဲ့ ပတ်ပြီး တင်းနေအောင် ချည်ကြတယ်။ ကျနော့် ကိုကျင်စက်နဲ့ နှိပ်စက်ကြ တော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ ကျင်စက်ရဲ့ အရှိန်ကို ဖြည်းဖြည်းလေး စလှည့်နေရာကနေ အရှိန်ကို တဖြည်းဖြည်းမြှင့်ယူသွားတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အရှိန်ကို ပြန်မချပဲ မြန်မြန်ကြီး လှည့်တော့တာပဲ။ တမိနစ်လှည့်လိုက်၊ တခါရပ်၊ တခါတလေ ဂင်တိုတို အရာရှိက လက်နှစ်ချောင်း ထောင်ပြလိုက်ရင် နှစ်မိနစ်ဆက် တိုက်လှည့်လိုက်နဲ့၊ ၀ါယာကြိုးတွေကနေ လာနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်ဟာ ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကတဆင့် အသားထဲ၊ အရိုးထဲ၊ အဆစ်အမြစ် တွေထဲ စီးဝင်နေတော့၊ တကိုယ်လုံး ကြေမွသွားသလို နာလိုက်ကျင်လိုက်တာဟာ၊ တခြား ဘာနာနည်းတွေနဲ့မှ မတူအောင် မျက်လုံးတွေပါေ၀၀ါးသွားပြီး ဘာမှမမြင်တော့တဲ့အထိ အခံရခက်တယ်။
ကျင်စက်ရပ်သွားတိုင်း ဖြောင့်ချက်ပေး တော့မလားလို့ သူတို့က မေးရင်၊ ကျနော်က ယိမ်းထိုးနေတဲ့ ကျနော့် ကိုယ်ကို ကြိုးစားထိန်းရင်း ခေါင်းခါပြလိုက်၊ ကျင်စက်ကိုင်တဲ့ရဲဘော်က အမိန့်တောင် မစောင့်တော့ပဲ ဆက်လှည့် လိုက်နဲ့ပေါ့။ ကိုယ်ထဲက အာရုံကြောစနစ်တွေပါ ပျက်သွားတဲ့အထိ တကိုယ်လုံးကျင်နေပြီး၊ ဆီးတွေပါ အလိုလို ထွက်ကျနေတဲ့အထိ ဖြစ်လာတော့၊ ကျနော်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သံမန်တလင်းပေါ် ပစ်လဲကျပြီး သတိလစ် သွားခဲ့တယ်။ နှစ်မိနစ်လောက် ကျနော် သတိလစ်နေပြီး၊ သတိပြန်ရလာတော့ အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပဲ၊ ကျနော့်ကို ဒီအတိုင်း ထားထားတယ်။ အတော်ကြီးကြာမှ ရဲဘော်တွေ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး ကျနော့်ကို ဆွဲထူပြီး ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ရက် အနေအထားနဲ့ ရွှေ့ တင်ကြတယ်။
ကျနော်က ကျနော့်ဟာ ကျနော် ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ စစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေပါ ပြန်ဝင်လာ ကြပြီး၊ ကျနော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်ကြပြန်တယ်။ ကျနော့်ကိုရေတိုက်၊ စီးကရက်တိုက်ပေမယ့် ဒီတခါ ကျနော် ဘာမှ မသောက်ချင်တော့လို့ ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်။ ဂင်တိုတိုအရာရှိက အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ ကျနော့်ကို အစိမ်းလိုက် “၀ါး” စားမယ့်ပုံနဲ့ ကြည့်နေပြီး၊ သူကပဲ ရအောင်စစ် နိုင်မလား၊ ကျနော်ကပဲ ဒီထက် ခံနိုင်ရည်ရှိမလား ဆက်ပြီး စမ်းချင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။
သူက ကျနော်ဟာ အင်မတန် ခေါင်းမာပြီး အပေးအယူ မလုပ်ချင်တဲ့ကောင်လို့ လူကြီးတွေက ယူဆသွားပြီး အရမ်း စိတ်ဆိုးနေကြတယ်၊ မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ ကျနော့်ကိုစစ်ဖို့ အထက်လူကြီးရဲ့အမိန့် ရောက်လာပြီ၊ ဒီထက် တဆင့်မြင့်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်မယ်လို့ ပြောတယ်၊ အထက်လူကြီးဆိုတာ မျက်မှန်ကြီးတင်ဦး ပဲလို့ ကျနော် နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးချစ်ခင် (လေ) ကိုကျော်ပြီး ရေကြည်အိုင် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး တပ်မှူးနဲ့ ထောက်လှမ်ရေး ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး မျက်မှန်ကြီး တင်ဦးဟာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ တိုင်ပင်ပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ဖမ်းတာဆီးတာ စစ်တာဆေးတာတွေ လုပ်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဖြစ်ချင်တာတွေကို ပုံဖေါ်ပေးနေ တယ်ဆိုတာ တပ်ထဲမှာ အားလုံးသိနေလို့ ပဲ။
ကျနော်က ‘ဒီလောက်ထိ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ အစစ်ခံနေတာ ခေါင်းမာနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ်သိတာနဲ့ ကိုယ့်သဘောထား အယူအဆတွေကိုတောင် ဖွင့်ပြောပြီးပြီ၊ ကိုယ်မသိတာ ကိုတော့ ကိုယ်အသိလုပ်ပြီး ဘယ်တော့မှ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်က ပြောတယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ အထက်က ဆရာကြီးကို ပြန်ပြောလိုက်’ လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ ပြောလိုက်တော့ ဂင်တိုတို အရာရှိရဲ့မျက်နှာဟာ မီးဝင်းဝင်းတောက် သွားပြီး ရဲဘော်တွေကို ဆက်လုပ်လို့ အသံကုန် အော်လိုက်တယ်။
ညိုညိုပိန်ပိန် အရာရှိကတော့ စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကျနော့်ကို ကြည့်နေတယ်။ အစောင့် နှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲ ခေါ်သွားပြီး၊ ခေါင်းရင်းဘက်ကို နှိမ့် ခြေရင်းဘက်ကို မြှင့်ထားတဲ့ ခုံတန်းပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် လှဲချလိုက်တယ်။ ရုန်းလို့ မရအောင် ကျနော့် တကိုယ်လုံးကို ခုံတန်းနဲ့ ရောပြီး အ၀တ်ဖြူစတွေနဲ့ ကြိုးတုပ်သလိုတုပ်ပြီး ချည်ကြပြီး၊ ခေါင်းပေါ်မှာ ရေဆွတ်ထားတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အသေးတထည် လာအုပ်ထားတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို ရေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လောင်းချလာတယ်။
ပါးစပ်က ပိတ်ထားလို့ ရပေမဲ့ နှာခေါင်းကပိတ်လို့ မရတော့ ရေဟာ အတားအဆီးမရှိ စီးဝင်လာတယ်။ ရေလောင်းတဲ့ အရှိန်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းမြန်လာတယ်။ အသက်မရှုပဲ အသက်အောင့်ထားတာကို လုပ်ပေမယ့် တမိနစ် နှစ်မိနစ်လောက်ပဲ လုပ်နိုင်ပြီး၊ အသက်ရှု လိုက်တာနဲ့ ရေက ဒလဟော နှာခေါင်းထဲကို စီးဝင်လာတော့ အသက်အောင့်တာလုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ အသက်ရှုမရ တာရယ်၊ ရေမွန်းတာရယ်ကြောင့် ရင်ဘတ်ကြီး ဖူးယောင်လာသလို အောင့်နေပြီး ကျနော်သတိလစ်သွားပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး။
သတိပြန်ရလာတော့ ကျနော်ဟာ ကျားခြင်္သေ့လှောင်အိမ်ထဲ ပြန်ရောက်နေတာ သိလိုက်ရတယ်။ ကျနော့် တကိုယ်လုံး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားတာ၊ ညိုသကြီးမှာ ဆေးထည့် ပတ်တီးပတ်ထားတာ၊ အင်္ကျီအ၀တ်အစားလဲ ပေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ မနက်တိုင်းမှာ ရဲဘော်တယောက်လာပြီး ဒဏ်ရာ တွေကို ဆေးထည့် ပတ်တီးလဲ ပေးနေတယ်။ ငါးရက်လောက် ကျနော့်ကို ဘယ်သူမှ လာမခေါ်ကြပြန်ဘူး။ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ အနာကျက်တဲ့အထိ၊ ခန္ဓာကိုယ် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အထိ အနားပေးထားတယ်၊ ပြီးရင် ထပ်နှိပ်စက်ကြဦးမယ် ဆိုတာ ကျနော် သဘောပေါက်ပါတယ်။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၉)
“မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း၊ (၆) ရက်မြောက်ည၊ နံနက် (၁) နာရီလောက်မှာတော့၊ ကျနော့် မျက်နှာကို အ၀တ်စည်းပြီး၊ အစောင့် (၂) ဦးက ခေါ်ထုတ်သွားကြပါတယ်။ ၃ မိနစ်ခန့် ကြာတဲ့အခါမှာတော့ အခန်းတံခါး ဆွဲဖွင့်ပြီး အခန်းတခုထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ မျက်စေ့ စည်းထားတဲ့ အ၀တ်စကို ဖြေလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့၊ ကျနော်ဟာမျက်မှန်တင်ဦးကြီးရဲ့ရုံးခန်း – သူ့စားပွဲ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရောက်နေတာ သိလိုက်ပါတယ်။ မျက်မှန်ကြီးက ဒေါသ အခိုးအလျှံတွေ ဝေနေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကျနော့်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ လှမ်းကြည့်ပြီး”
“မင်းဟာခုအထိ တော်တော် ခေါင်းမာတဲ့အကောင်ပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်က မရ၊ ရတဲ့နည်းနဲ့ စစ်လို့ အမိန့် ပေးထားပြီးပြီ။ ခုလောက် အနာခံရတာကိုမှ သင်ခန်းစာ မယူတတ်သေးရင် သေသည်အထိ မင်းကို ဆက်စစ်ရလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘာမှခြွင်းချန်မထားပဲ ဖြောင့်ချက်ပေးလိုက်။ ငါမင်းကို ခေါ်ပြီး နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး ပေးလိုက်ခြင်းပဲ။”
ကျနော်က ပြန်ပြောမလို့ လုပ်နေစဉ်မှာပဲ မျက်မှန်ကြီးက အစောင့် (၂) ဦးကို အချုပ်သားကို ခေါ်သွားကြလို့ အမိန့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစောင့် (၂) ဦးဟာလဲ အမိန့် အတိုင်း ကျနော့ မျက်နှာကို စည်းပြီး မျက်မှန်ကြီး အခန်းက ခေါ်ထုတ်သွားကြပါတယ်။
(၅) မိနစ်လောက် ကြာတဲ့အခါ အခန်းတခုနှင့်
တံခါးဖွင့်သံကြားရပြီး၊ ကျနော့်ကို ဆွဲသွင်းကြပါတယ်။ မျက်စေ့ကို စည်းထားတဲ့ အ၀တ်ကို ဆွဲဖြေလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ – ယခင် စစ်ဆေးနေကျ ပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးရှိနေတဲ့ စစ်ဆေးရေး အခန်းထဲ ရောက်နေတာ တွေ့လိုက်ပါတယ်။
ခတ်ပိန်ပိန်၊ အသားညိုညို ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကတော့၊ စိတ်မကောင်းပုံ ပေါ်နေသလောက်၊ ဂင်တိုတို ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက် နှာကတော့ အောင်သေ၊ အောင်သား၊ မကြာမီ စားရတော့မဲ့အလား ဖြစ်နေပါတယ်။
ခပ်ပိန်ပိန် ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီး၊ တပ်တွင်းက ပြန်လည်ပုန်ကန်မဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ဖြောင့်ချက် ပေးမပေး၊ အဖြေပေးဖို့(၃) မိနစ်အချိန်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျနော်က သူ့စကားဆုံးဆုံးချင်းပဲ၊ ကျနော့်မှာ ဘာမှ ထပ်ဖြောင့်ချက်ပေးဖို့ မရှိကြောင်း အဖြေပေး လိုက်ပါတယ်။ ကျနော့် စကားဆုံးတာနဲ့တပြိုင်နက် ဒေါသမာန်ဟုန် ပြင်းထန်နေတဲ့ ဂင်တိုတို ပုဂ္ဂိုလ်က ဒေါသသံပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ အသံကြီးနဲ့ အစောင့် (၂) ဦးကို “ရဲဘော် ဆက်လုပ်” လို့ အမိန့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အစောင့် (၂) ဦးလည်း အလေးပြု ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်၊ ပါးကွက် အာဏာသား (၃) ဦး၊ ကြိုးများနဲ့ ဝင်လာကြပါတယ်။
ပါးကွက်အာဏာသား ၃ ဦးဟာ ကျနော့်ကို ထိုင်နေရာက အတင်းဆွဲထ စေပြီး မတ်တပ်ရပ် အနေအထား၊ လက်နှစ် ဖက်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘေးတဖက် တချက်စီမှာကပ်စေပါတယ်။ နောက်ပြီးမှ တကိုယ်လုံးကို လက်သန်းလုံးလောက် ရှိတဲ့ ကြိုးနဲ့ ရင်ဘတ်အောက်ပိုင်း၊ တင်ပုဆုံ၊ ခြေချင်းဝတ်၊ သုံးနေရာမှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တုတ်နှောင်လိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ – အခန်း မျက်နှာကျက် အလယ်လောက် မှာရှိတဲ့ သံမဏိချိတ် စက်သီးပေါ် လက်မလောက်ရှိတဲ့ ကြိုးတချောင်းကို ပစ်တင်လိုက်ပြီး၊ ကြိုးစတဖက်အား ကျနော်ရဲ့ ခြေချင်းဝတ်မှာ တုတ်စည်း ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးမှာ ၂ ပတ် ၃ ပတ်လောက်ရစ်ပြီး တုတ်နှောင်လိုက် ပြန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော့်ကို သံမံတလင်းပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပါတယ်။
ပါးကွက်အာဏာသားတဦးက “အသင့်” လို့ အော်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ စစ်ဆေးသူ ၂ ဦးဟာ ထိုင်ရာမှ ရပ်လိုက်ပြီး ဂင်တိုတိုပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လုပ်လို့ အမိန့်ပေး လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ပါးကွက် အာဏာသား ၂ ဦးဟာ တဖက်ကြိုးစကနေပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆွဲပါတော့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်သွားပါတယ်။ စက်သီးနဲ့ ခြေထောက် တစ်ပေသာသာ အကွာလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာ အဆွဲရပ်ပြီး ကြိုးစကို နံရံဘေးမှာ ရှိတဲ့ချိတ်မှာ ရစ်ပတ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမတော့ ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနည်းငယ် လည်ရမ်းနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဂင်တိုတိုလူက ပါးကွက်အာဏာသားမှူးကို “ဆရာကြီး ဒီလူဖြောင့်ချက် ပေးမယ်ဆိုမှ ကျနော်တို့ကို လာခေါ်” လို့ အမိန့်ပေးပြီး ဆရာကြီးဆိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်က လွဲပြီး အားလုံး အပြင်ကို ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။
ကျနော်လဲ ဆရာကြီးဆိုသူကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်နေရာက စူးစိုက်ကြည့်လိုက် မိပါတယ်။ ပုပု ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်၊ အသားမည်းမည်းကြုတ်ကြုတ်၊ မျက်နှာဆိုးဆိုးနဲ့ ဒါမျိုးတွေ သူ့အဖို့ ရိုးနေပြီ၊ သူ့မှာ ဘာခံစားချက်မှ မရှိဘူးဆိုတာ သူ့မျက်နှာမှာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ကျနော့် ဦးခေါင်းကတော့ သံမံတလင်းရဲ့အထက် ၃ ပေ အမြင့်လောက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးရဲ့အောက်ကို ဆွဲနေတဲ့ အလေးချိန်ဒဏ်ကို ခြေချင်းဝတ်တွေမှာ အင်မတန် အခံရခက်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲ မှုကြီးကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ခံစားရပါတော့တယ်။
နာရီဝက်လောက် ကြာတဲ့အခါမှာတော့ တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ သွေးတွေဟာ ဦးခေါင်းဆီကို ဦးတည်စုပြုံ စီးဆင်းနေကြတာမို့၊ ပထမဦးခေါင်းတခုလုံး ပြည့်တင်းရောင်ရမ်းတဲ့ အသိမျိုး ခံစားရပါတယ်။ ဒီထက် ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့ မျက်လုံးတွေ မှုန်ဝါးလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင် တခုလုံးဟာ မသဲမကွဲ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခြေချင်းဝတ် နေရာဟာ အင်မတန် နာကျင် ကိုက်ခဲရာက တဖြည်းဖြည်း ထုံကျင်လာပါတော့တယ်။
လက်နှစ်ဘက်ကလဲ ဒီအတိုင်းပဲ တဖြည်းဖြည်း ထုံလာပါပြီ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် အနေအထားနဲ့ ကြာရှည်ထားတဲ့အတွက်၊ အစာအိမ်နဲ့ အခြား အတွင်း ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအချို့က အရည်အချို့ဟာလဲ ပါးစပ်ပေါက်ကတဆင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း စီးလာ ပါတော့တယ်။ ကျနော့် မျက်လုံးတွေက တဖြည်းဖြည်း ပြာလာပါပြီ။ အသက်ရှုရတာ မြန်လာသလို ရင်ထဲမှာလဲမော ပန်းတင်းကြပ်လာပါပြီ။ အသက်ရှု မ၀တော့ပါ။ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်လဲ ငါရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တော့ ရောက်လာပြီ လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးပီပီ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကြိုးစားအာရုံပြုလိုက်ပါတယ်။ များမကြာခင်မှာပဲ ကျနော့် မျက်လုံးအစုံ မှုန်ဝါးရီဝေနေရာမှ တချက်တချက် မဲမှောင်သွားပါတယ်။ မျက်ခွံတွေဟာလဲ တဖြည်းဖြည်း လေးလံလာပြီး ကျနော်ဘာမှသတိမရတော့ပါ။
ကျနော် သတိရလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သံမံတလင်း ပေါ်ရောက်နေပြီး၊ ပါးကွက် အာဏာသား တစ်ဦးက ကျနော့်မျက်နှာကို ရေခဲရေစိမ်ထားတဲ့ အ၀တ်တခုနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေး နေပါတယ်။
အဲဒီနေ့ညကိုတော့ ကျနော် ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မယ် မဟုတ်ပါ။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ သတိလည် လာတာ နဲ့တပြိုင်နက် ပါးကွက်အာဏာသားတွေဟာ ကျနော့်ကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဆွဲထားကြ ပြန်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ကြတာဟာ (၄) ကြိမ်ထက် မနည်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျနော် သတိပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာတော့ ကျနော်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ အချုပ်ခန်း ကုတင်ပေါ်ကို ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ ကိုယ်ပေါ်မှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေလဲ မရှိတော့ပါဘူး။ တကိုယ်လုံးမောပန်း နွမ်းလျနေသလို၊ ခြေချင်းဝတ်နေရာတွေကတော့ အင်မတန် နာကျင် ကိုက်ခဲ နေပါတယ်။ နောက်ပြီးအဲဒီနေရာမှာ ကြိုးဒဏ်ကြောင့် အချို့ နေရာတွေမှာ ညိုမဲနေသလို အချို့ နေရာတွေမှာလဲ အသားတွေ လန်နေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
နောက် ၂ ရက်ခန့် ကျနော့်ကို အချုပ်ခန်းထဲမှာပဲ ထားပါတယ်။ နေ့တိုင်း ဆေးရဲဘော် တယောက်လာပြီး ခြေချင်း ၀တ်မှာရှိတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးကြော၊ ဆေးလိမ်းပေးပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကလဲ ပုံမှန်အတိုင်းရပါတယ်။ (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ ကျနော် လမ်းလျောက်လို့ ရပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ငါဘယ်လို ငရဲခန်းမျိုး မကြာခင် တွေ့ရဦးမယ်ဆိုတာ တွေးတော နေမိပါတယ်။
အဲဒီနေ့ ည (၈) နာရီသာသာခန့်မှာပဲ ကျနော့်မျက်နှာကို အ၀တ်စည်းပြီး အစောင့် နှစ်ယောက်က ကျနော့်ကိုခေါ် ထုတ်သွားကြပါတယ်။ (၂) မိနစ်လောက် အကြာမှာ လေနုအေးရဲ့တိုးဝှေ့ တိုက်ခတ် လိုက်တာကို တွေ့ထိရတာမို့ အဆောက်အဦး အပြင်ဘက် ရောက်နေပြီ ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပြီးနောက် သော့ခလောက် ဖွင့်သံကြားရပြီး ကျနော့်ကို အထဲ ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီးမှ ကျနော့်မျက်နှာကို စည်းထားတဲ့ အ၀တ်စ ကို ဖြည်လိုက်ကြပါတယ်။
ပထမတော့ စစ်ဆေးတဲ့နေရာ၊ စစ်ဆေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြောင်းတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ကျနော် ထင်မိပါတယ်။ နောက်မှ မဟုတ်မှန်း သိလာရပါတယ်။ ကျနော့်ကို ထပ်မံ မစစ်ဆေးတော့ပဲ၊ နေရာပြောင်းချုပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးပြီး နောက်ထပ် ဘာမှ ထပ်ရစရာမရှိတော့ပြီလို့ ယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို ချုပ်ထားတဲ့နေရာပါပဲ။ အိပ်ယာ၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ ကစပေးပါတယ်။ ကျနော့်ကို ချုပ်ထားတဲ့ နေရာကတော့ ရေကြည်အိုင် အတွင်းထောင်ရဲ့အပြင်ဖက်က အဆောင်ကိုယ်စီနဲ့ ထားတဲ့အချုပ်ခန်းတွေပါပဲ။
ကျနော်သိရသလောက် ကျနော်တို့ အတန်းမှာဆိုရင် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး အချုပ်သ္မားများ များပါတယ်။ သိရသလောက် ဂျာနယ်ကျော် ဒေါ်မမလေး၊ တပ်မတော်လေတပ်မှ ဗိုလ်ကြီးဒေါ်လှသန်း၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတင်မောင် ဇနီးနဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
“နေပါဦး၊ ဗိုလ်ကြီးကိုသူတို့ စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး၊ နောက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားရာက၊ ခုလို cell အချုပ်ခန်းထဲ ဘယ်လိုပြန် ရောက်လာရတာလဲ လို့” ကိုအောင်သူက မေးမြန်း လိုက်တဲ့အခါမှာတော့….
အဲဒီအကြောင်း ကျနော် ပြောပြမလို့ပါပဲ၊ အတိုချုံးပြောရရင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်မှာ ကျနော့်ကို ဘေးပတ် ၀န်းကျင်အချုပ်သားများနဲ့ လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်ပြီး၊ အချုပ်စခန်းရဲ့ စည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖေါက်တယ်ရယ်လို့ အစောင့်တစ်ဦးက တိုင်တန်းသတင်းပို့တာကြောင့် – မျက်မှန်ကြီးက ခေါ်ယူ၊ ဆဲဆို၊ ကြိမ်းမောင်း၊ ထိုးကြိတ်ပြီး အပြစ်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ Cell အချုပ်ခန်းကို ပြောင်းလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာအနေအထိုင်၊ အစားအသောက်က အစ၊ ကျဉ်းကျပ် ရုတ်လျော့သွားပြီး၊ ကျနော့်ကို သူတို့စိတ်ကြိုက် လူမဆန်အောင် ညှင်းပန်း နှိပ်စက် လိုက်ကြတဲ့ အတွက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ချိနဲ့ပြီး ခုလို ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မကောင်းတဲ့ အခြေရောက် ပေမဲ့လဲ၊ ကျနော့် စိတ်ဓါတ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပျော့ညံ့မသွားပါဘူး။ အထူးသဖြင့်၊ မျက်မှန်ကြီးနဲ့ အပေါင်းပါ ပါးကွက် အာဏာသား အားလုံးကို ဇာတ်သိမ်း ကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ ၊ အမြဲ မေတ္တာပို့သလျက် ရှိနေပါတယ်” လို့ ဆို့နင့်သံ အပြည့်နဲ့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးက သူ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ပြန်ပြောင်းပြောဆိုမှုကို နိဂုံးချုပ် လိုက်ပါတယ်။
ကျနော်နဲ့ ကိုအောင်သူ ကြားတွင်ရှိသည့် မီးဖိုမှ မီးအရှိန်သည်လည်း အတော်အားလျော့ မှေးမှိန်နေပြီ ဖြစ်သော် လည်း၊ ကိုအောင်သူ၏ မျက်လုံးအစုံတွင် မျက်ရည်များ လဲ့နေသည်ကို ကျနော် သတိထားမိပါသည်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ခံစားမှုများက ရင်ထဲတွင် တင်းကြပ် ဆို့နင့်နေပါသည်။
ကျနော်မှ ထင်းတုံး ၃/၄ တုံးကိုယူပြီး မီးဖိုထဲသို့ တစ်တုံးပေါ် တစ်တုံးဆင့် ထည့်သွင်း လိုက်ပါသည်။ ကိုအောင်သူကလည်း သူ့ရှေ့တွင် ချထားပေးသော ရေနွေးကြမ်းအိုးမှ လက်ကျန် ရေနွေးကြမ်းကို သူ့ပုဂံထဲ ထည့်လိုက်ပြီး – အ၀ မော့သောက်လိုက်ပါသည်။
မနီးမလှမ်း အရပ်ဆီမှ ကြက်တွန်သံများပင် ကြားရပါပြီ။ သို့ သော် ကျနော်တို့တွင် အိပ်ချင်စိတ် လုံးဝ မရှိတော့ပါ။ ခံစားချက်တွေက ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်တို့ကို အပြည့်အ၀ လွှမ်းခြုံထား လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်အတော်ကြာ ထိုင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် အပေါ့အပါးသွားရန်နှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ရန် အိမ်အပြင်သို့ ကျနော်တို့ နှစ်ဦး ထွက်လာကြပါသည်။
ပြင်ပတွင်ကား ငွေစန္ဒာလရောင်က လွန်စွာမှ တင့်ရွှန်းလှပနေပေသည်။ သစ်ပင်၊ သစ်ရွက်၊ သစ်ခက် ကြီးကြီး ငယ်ငယ် တို့သည် လရောင် နှင့် နှင်းရည်တို့ကို အတားအဆီး မရှိ လွတ်လပ်စွာ သောက်သုံးနေကြလေသည်။ အားလုံးသည် လရောင်အောက်တွင် စိမ်းရည်ရွှမ်းပြီး၊ အစွမ်းကုန် လန်းဆန်းနေကြသည်။ စည်သာချောင်း၏ ညင်သာသော ရေစီးသံက သဘာဝအလှကို ဂီတဖြင့် တန်ဆာ ဆင်ထားပြန်သည်။
ကျနော်တို့ အိမ်ပေါ်သို့ ပြန်တက် လာကြသည့် အခါတွင်ကား မီးဖိုတွင် ဖြည့်ခဲ့သော ထင်းကြောင့် မီးအရှိန် အတော်ရ နေပေပြီ။ ကျနော်သည် ရေနွေးကြမ်းအိုးအား ရေအနည်းငယ် ထည့်ဖြည့်ပြီး မီးဖိုခနောက်ပေါ်သို့ တင်လိုက်ပါသည်။ နှမ်းပြစ်၊ မြေပဲဆားလှော်များကို ပုဂံများအတွင်းသို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါသည်။
“ကဲ အကိုရေ၊ အခု ကျနော်ပြောပြမှာကတော့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့ နေ၀င်ချိန် (၀ါ) ခရီးဆုံးအပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ကိုအောင်သူက သူတွေ့ရှိ၊ သိရှိရသည့် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ နိဂုံးပိုင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြပါတော့သည်။
“ဆောင်းနှောင်းနေ့တနေ့ရဲ့ နံနက်အာရုံဦး။ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အခန်းမှ အချက်ပေးသံကြောင့် ကျနော် လန့်နိုး ခဲ့ရပါတယ်။ သူက တညလုံးကိုက်ခဲ ညောင်းညာနေပြီး ဆီးသွား၍ သိပ်မရကြောင်း- ဆီးအနည်းငယ်ထွက်ဖို့ ညှစ်လျှင် ဆီးအိမ်နဲ့ ဆီးစပ်တ၀ိုက် အင်မတန် နာကျင် ကိုက်ခဲနေကြောင်း – ရှိသည့်သောက်ရေ လည်းကုန် သွားပြီဖြစ်လို့ ရေ အနည်းငယ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်လဲ ချက်ခြင်း ရေတံခေါင်းထဲမှာ ရှိသမျှရေကို အပေါက်ကြားမှ ဇွန်းမြီးဖျားထိုးပြီး တဖြည်းဖြည်း လောင်းချ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေအ၀သောက်ဖို့နဲ့ စိတ်အေးအေးထားဖို့- မနက် မိုးလင်းလို့ တာဝန်ကျ အစောင့်တွေ လာရင် နေမကောင်းကြောင်း သတင်းပို့ဖို့ အားပေးစကား ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ မနက်ပိုင်း အချုပ်သားတွေကို ချေးအိုးသေးအိုးသွန်ဖို့နဲ့ မျက်နှာသစ်ကြဖို့ ထုတ်တဲ့အခါ သူရဲ့ မျက်နှာ အထူးနွမ်းလျနေပြီး ခြေထောက် အစုံဟာလည်း အထူးအားယူပြီး လျှောက်နေ ရတာကို သတိပြုမိပါတယ်။
နေ့ခင်း ကျနော်နဲ့ သူနဲ့ စကားပြောကြစဉ်ကလဲ သူ့အသံတွေဟာ တုန်ရီနေပြီး အားအင်ချိနဲ့ နေတာက အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ သူက အစောင့် တာဝန်ကျတွေကို နေမကောင်းကြောင်း၊ ရေပိုပေးဖို့ ပြောပြပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အစောင့်များက ဆရာဝန်လာရင် သတင်းပို့ပေးမယ်လို့ ပြောကြောင်း၊ သူ့ကိုသနားတဲ့ အစောင့်တဦး ကတော့ ရေတံခေါင်းအပိုတခု လာပေးကြောင်း၊ ယနေ့ နေ့လည်စာ စားမ၀င်ကြောင်း၊ ရင်ပြည့်ပြီးစားချင်သည့် စိတ်မရှိကြောင်း၊ ရေကိုသာ ကြိုးစား သောက်နေကြောင်း၊ ကိုက်ခဲ နာကျင်သည့်ဒဏ်ကတော့ ပျောက်မသွား သေး ကြောင်း၊ ဆီးသွားရမှာကိုပင် နာကျင်လွန်းလို့ ကြောက်နေမိကြောင်း၊ ဦးနှောက်တွေလဲ မူးဝေထိုင်း မှိုင်း နေပြီး မျက်စိများလဲ ကြည့်ရသည်မှာ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေကြောင်း၊ တခါတရံ မိုက်ကနဲ မိုက်ကနဲ ဖြစ်တတ်ကြောင်း တတ်နိုင်သမျှ လဲလျောင်းအိပ်စက် နေလိုကြောင်း စသည်များကို ပြောပါတယ်။
ညနေပိုင်း ထမင်းစားပြီးချိန်တွင် ကိုအောင်သူသည် ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး နှင့် ဆက်သွယ်ပေမဲ့လဲ ၂ မိနစ်ခန့် ကြာမှသာ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးမှ ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အစာစားလိုစိတ် မရှိလို့ ညနေစာ မစားကြောင်း၊ ဆီး သွားရတာလဲ အင်မတန်ခက်ပြီး ဆီးစပ်တပြင်လုံး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုက်ခဲနာကျင်နေကြောင်း၊ ဒါ့အပြင်အဖျား သွေးလဲရှိနေ ကြောင်း၊ အခုအထိလဲ ဆရာဝန် လာမကြည့်ကြောင်း၊ ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ ငရဲခန်းတွေမှာ နေထိုင်မကောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေကို လူချင်းမစာနာ သေရင်လဲ ပြီးရောဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ပဲ ပစ်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများအပြား ရှိမှာမလွဲကြောင်း၊ သူကတော့ ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့် ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းများကို တလုံးချင်း အားယူပြီး ပြောပြပါတယ်။ နောက်ပြီးမှ- ကိုအောင်သူရေ အခြေအနေ ပေးသေး ရင်လဲ နက်ဖြန်မှ ပြန်ဆုံကြတာ ပေါ့ – လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ ညမှာ နွေးနွေးထွေးထွေး အိပ်ဖို့ အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်ရင် လျှို့ဝှက် ဆက်သွယ်ဖို့ ပြောပြီး လူချင်းခွဲလိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒီ ညဦးပိုင်းမှာတော့ အခြေအနေဟာ ငြိမ်သက်နေပေမဲ့လဲ နံနက် ၁ နာရီကျော်ကျော်ပိုင်း မှာတော့ ကျနော် အိပ်ယာက လန့်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ လန့်နိုးတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အခန်းမှ ငြီးသံကို တချက်တ ချက်ရလို့ ပါပဲ။ ကျနော်က အချက်ပေးပြီး ခေါ်ယူပေမဲ့လဲ ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူး မလာပါ။ သစ်သားနံရံ အက်ကြောင်း လျှို့ဝှက် ပေါက်လေးကြားမှ သူ့အခန်းကို ချောင်းကြည့် လိုက်တော့ မီးရောင်မှုန်ဝါးဝါးအောက် ကုတင်ပေါ်မှာ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးဟာ ဘယ်ဖက်ကို စောင်းအိပ်ရင်း တကိုယ်လုံး တုန်ရီနေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူး အဖျားတက် နေပြီဆိုတာ ကျနော် ကောက်ချက် ချလိုက်ပါတော့တယ်။
ကျနော်လဲ အခန်းချင်းကပ်ရက် ဖြစ်နေပေမဲ့လဲ ဘ၀တူ ကိုယ့်ရဲဘော်ရဲဘက် တယောက်ကို ဘယ်လိုမှ အကူအညီ မပေးနိုင်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ အချုပ်သားဘ၀ကို နာကျည်းနေ မိပါတယ်။ အဲဒီညကတော့ ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူး ပြန်လည်ကျန်းမာ လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံက လွဲပြီး ကျနော်ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
နောက်တနေ့ နံနက်အချုပ်သားတွေ အပြင်ထုတ်ချိန်မှာတော့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ထွက်တာ မတွေ့ရပါ။ နံနက်၁၀ နာရီ သာသာခန့် မှာတော့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အခန်းသော့ဖွင့်သံ ကြားပြီး ၃မိနစ်ခန့် အကြာမှာ အခန်းသော့ပြန် ပိတ် သွားပြီး လူ၂ဦး ၃ဦး လမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားသံကို ကြားမိပါတယ်။ အခြေအနေ ခေတ္တ ငြိမ်သက် သွားအောင် စောင့်ဆိုင်းပြီးမှ ကျနော်လဲ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အခန်းကို လျှို့ ဝှက်ပေါက် ကလေး မှ လှမ်း ကြည့်မိပါတယ်။ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး ကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ ပက်လက်လှန်ပြီး အိပ်ပျော်နေပုံ ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ခြုံထားတဲ့စောင် တုန်ခါနေတာမြင်ရလို့ အဖျားတက်နေတုံးပဲ ဆိုတာသတိပြုမိပါတယ်။ ကျနော်လဲ အခြေအနေပေးရင် ပေးသလို ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကို ချောင်းကြည့်ပေမဲ့ ပက်လက်အိပ်နေတာရယ် တကိုယ်လုံး တုန်ရီနေတာကလွဲပြီး ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။
အဲ ည ၇ နာရီ ထိုးခါနီးမှာတော့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  အချက်ပေးသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော် အတော် ၀မ်းသာ သွားမိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့အခြေအနေ ကောင်းလာတာ ဖြစ်မှာပဲလို့ မျှော်လင့်တဲ့အ တွက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ စကားစပြောရင်ပဲ ကျနော့် မျှော်လင့်ချက်ဟာ အင်မတန် မှားယွင်းသွားပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘာပြုလို့ လဲဆိုတော့ သူ့အသံဟာ တုန်ရီ မောဟိုက်နေတဲ့ အပြင် စကားတလုံး တလုံးကို အားယူပြီး ပြောနေရလို့ ပါ ပဲ။
“ကိုအောင်သူ၊ ကျနော် ခင်ဗျားနဲ့ နောက်ဆုံး စကားပြောချင်လို့ ကျနော့် ကုတင်ကနေ ဒီနေရာကို အထူး ကျိုးစားပြီး လာခဲ့ရတယ်။ မနက်ပိုင်းက ဆေးတပ်ကြပ်ကြီး ခဏ လာမေးမြန်းပြီး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး၊ ငှက်ဖျားဆေး စတာတွေ ပေးသွားတယ်။ ဆေးမှူးကို တင်ပြပြီး ဆေးမှူး လာရောက် စစ်ဆေးပြီးမှ လိုအပ်ရင် ဆေးရုံတင်ဖို့ အထက်ကို တင်ပြပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ပြောသွားတယ် ”
“ဒါပေမဲ့လဲ ကျနော့်အခြေအနေ ကျနော်သိပါတယ် ကိုအောင်သူရယ်။ ဖက်ဆစ်တွေရဲ့  လူမဆန် ရက်စက်ယုတ် မာတဲ့ ညှင်းဆဲမှု ဒဏ်တွေအပြင် အမျှင်မပြတ်တဲ့ ငှက်ဖျားကလဲ ပြန်ဝင်လာပြီ ဆိုတော့ ကျနော့်အတွက် မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ပါဘူး။ ကျနော့် မျက်စေ့တွေလဲ ၀ါးကုန်ပြီ၊ ဘာကိုမှ ထင်ထင်ရှားရှား မမြင်ရတော့ဘူးဗျာ”
“ဒီတော့ အချိန်ရတုံးလေး ကျနော်မှာချင်တာလေးတွေ မှာခဲ့ပါရစေ။ ပထမဆုံး အချက်ကတော့- သင့်တော်တဲ့ အချိန် အခါရောက်ရင် ကျနော် တယောက် ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရေကြည်အိုင် ငရဲစခန်းမှာ ဘယ် လိုဇာတ်သိမ်း သွားတယ်ဆိုတာ – ပြည်သူတွေကို တင်ပြ အသိပေး ပေးပါ။ ဒုတိယ အချက်ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကို ယုံယုံကြည်ကြည် တက်တက်ကြွကြွ စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် ဆက်လက်တိုက် ပွဲဝင်သွားကြပါလို့။ နောက်ဆုံး မှာချင်တဲ့ အချက်ကတော့- ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရမှ သပြေတခက် ရေချမ်းခွက်နဲ့ ရောက်ရာဘ၀က ကျနော့်ကို အမျှဝေပေးပါလို့”
အာဇာနည် ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူးဟာ တိုင်းပြည်ကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အနေနဲ့ မြင်သွားချင်ပေမဲ့ သူ့ဆန္ဒ မပြည့်ဝခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်မှန် သူ့ရဲ့  ကြေကွဲဖွယ် ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက် တင်ပြသွားပါမယ် ခင်ဗျား။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၁၁)
မတ်လ (၈) ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြိုဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးကြီး စတင်ခဲ့တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးမှာ အမျိုးသားဖခင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့  လက်ရုံးတစ်ဆူ ဖြစ်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူးကို ကြားဖူးနားဝ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေက သူ့ရဲ့ သား ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အကြောင်း ကိုတော့ တိမ်မြှပ် ဖျောက်ဖျက် ထားကြပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အသက်ပေးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  အကြောင်းကို ဆက်လက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ တဆက်ထဲမှာ ဒီဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ တပ်မတော် အရာရှိရဲ့  ဆန္ဒမွန်ဖြင့် တင်ပြထားချက်အား ဖတ်ရူကာ ဖက်ဆစ်ထက် ဆိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို လက်တွဲပြီး စည်းလုံး ညီညွတ် စွာဖြင့် ဖယ်ရှားကြပါရန် တိုက်တွန်းတင်ပြ လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  အသံ တိုးတိမ်သွားသလို ကျနော့် ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံး နွမ်းချိ ဆို့ နင့် မျက်ရည် ၀ဲလျက် ရှိနေ ပါတယ် “ဗိုလ်ကြီး မှာတာတွေ ကျနော်ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါ။ ဗိုလ်ကြီး ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲ ထမြောက်အောင် ကျနော်အစွမ်း ကုန်ကြိုးစားပါ့မယ်”
“သာဓု သာဓု သာဓု ကဲ ကိုအောင်သူရေ Goodbye and good luck နော်- သွားပြီဗျာ”
“ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ကြီးခင်ဗျာ Goodbye and all the best”
ကျနော်သည် အပေါက်လေးအကြားမှ ချောင်းကြည့်နေမိပါသည်။ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးသည် တဖြည်းဖြည်းချင်း အားယူပြီး သူ့ ကုတင်ဆီသို့ တွားသွားနေပါသည်။ အတန်ကြာမှ ကုတင်နား ရောက်ပြီး ခက်ခဲစွာနဲ့ ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန် လဲလျောင်းရင်း သူ့တကိုယ်လုံးကို စောင်ဖြင့် လွှမ်းခြုံ လိုက်ပါတော့သည်။
အဲဒီည ၈ နာရီခန့်လောက်မှာ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  ရေတောင်းသံကို ကြားရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသံဟာ တုန်ရီပြီး ပုံမှန် အသံ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ကျနော်ကလဲ ဒီဖက်အခန်းက အသံပြန် ပေးရင်း ရေပေးနေကျ အပေါက်ဆီသို့ လာရန်အချက် ပေးပေမဲ့လဲ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး မလာနိုင်တော့ပါ။
သူ့မှာ အသံလာရာ Direction ကို မှန်းဆတတ်သည့်အသိ မရှိတော့။ အသံကိုသူ့ နားသောတ က လုံးဝလက်မ ခံတော့ဆိုသည်ကို သဘောပေါက်မိ ပါတယ်။
မကြာမီမှာပဲ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  ကယောင်ကတမ်း ပြောသံ၊ တချက်ချက် စူးရှတဲ့ အော်သံ၊ ငြီးတွားသံတွေ ထွက်ပေါ် လာပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာမှ အချုပ်ခန်းစောင့် ရဲဘော် ၂ ဦး ဘယ်က ပေါက်လာသလဲမသိ၊ ပြေးလွှားပြီး ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  တံခါးသော့ကို ဖွင့်ပါတော့တယ်။
အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးအစောင့် တယောက်ဟာ ချက်ခြင်း ပြန်ထွက် သွားပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးရဲ့  ကယောင်ကတမ်း ငြီးတွားသံတွေဟာလဲ တဖြည်းဖြည်း ငြိမ်သက် သွားပါတော့တယ်။ မိနစ်၂၀ ခန့် အကြာမှာမှ အစောင့် ၄/၅ ဦး ထပ်မံ ရောက်လာပြီး ဗိုလ်ကြီး မြင့်ထူးကို ထမ်းစင်ပေါ်တင်ပြီး ထုတ်သွားတော့ တာပါပဲ အကိုရယ်”
ကိုအောင်သူရဲ့  ဆို့နင့်ကြေကွဲ မျက်ရည်လွှမ်းသံတို့က ပတ်ဝန်းကျင်ကို တဒင်္ဂကြီး စိုးနေပါသည်။ ကျနော့်ပါးပြင် ပေါ်တွင်လဲ သူငယ်ချင်းဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး အတွက်ယူကျုံးမရဖြစ်မှု၊ မချိတင်ကဲဖြစ်မှု၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပေါ် နာကျည်းစက်ဆုပ်မှု၊ ပေါင်းစုစီးမှုကြောင့် ပူနွေးသော မျက်ရည်များက အဆီးအတားမရှိ ဖြာဆင်းနေပါတော့သည်။
ကျနော်တို့ ရှေ့တည့်တည့်ရှိ မီးလင်းဖို မီးသည်လည်း အားကုန်အရှိန် လျော့စပြုနေပါပြီ။ ဈေးကုန်းရွာမှ ကြက်တွန်သံ၊ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှ အုန်းမောင်းခေါက်သံများကလည်း မကြာမှီ ရောင်ခြည်ဦး သန်းတော့မည်ကို ထုတ်ဖေါ်နေပါသည်။
စည်သာချောင်း၏ ရေစီးသံသည် ညင်သာ ငြိမ့်ညောင်းလှသဖြင့် လွမ်းဆွတ်ဖွယ် အတိ ဖြစ်နေပါသည်။
ကျနော်တွင် ဤမှတ်တမ်းကို ပြည်သူသို့ တင်ပြရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းများ ရှိနေပါသည်။
ပထမအချက်မှာ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူး၏ ၀ိညာဉ်သည် ရေကြည်အိုင်ငရဲ အချုပ်ခန်းလေး သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရုံ ဘယ်နေရာမှာ ကြွေလွင့်ခဲ့ရသည်ကိုတော့ မျက်မှန်တင်ဦးကြီး နှင့် စစ်ဆေးရုံမှ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များသာ အမှန်ကိုသိကြ ပါမည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးသည် မျက်မှန်တင်ဦးကြီး ဦးစီးသော ရေကြည်အိုင် ထောက်လှမ်းရေး ငရဲခန်းတွင် တိရစ္ဆာန် အဆင့်ထက် နိမ့်ကျစွာ ညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှု ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တို့ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရပါပြီ။ ခပ်ရှင်းရှင်းရေးရလျှင် မျက်မှန်တင်ဦးကြီး နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတို့က ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကို အသေသတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်မှာ လွန်စွာမှ ထင်ရှား လှပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်တို့ မည်သည် မိမိအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် စစ်ထောက်လှမ်းရေးကို ပင်မ ဒေါက်တိုင်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု တို့အပေါ် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ညှင်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုများကို တရားမရှိ တံခါးမရှိ စော်ကား ကျူးလွန်လျက် ရှိနေပါသည်။
အမျိုးသား အားလုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ရသည့် ဖက်ဆစ် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကြီးတွင် တမျိုးသားလုံး၏ တာဝန်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တာဝန် ကျေပွန်အောင် ထမ်းနေ ခိုက် ကျဆုံးသွားရရှာသော အထက် မြန်မာပြည် တိုင်းမှူး အာဇာနည် ဗိုလ်မှူးကြီး ဗထူး၏ မျက်နှာကိုပင် မထောက်ညှာ မငဲ့ကွက်ပဲ၊ သားဖြစ်သူ ဒီမိုကရေစီရေးကို ချစ်မြတ်နိုးသူ ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကိုလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်တံ့ ခိုင်မြဲနိုင်ရေးအတွက် ရေကြည်အိုင် ငရဲခန်းတွင် မျက်မှန်တင်ဦးကြီး ဦးစီးသော စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ က ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။
သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စော- အခန်း (၁၂) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
ဗိုလ်ကြီးမြင့်ထူးကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူမှုလွတ်လပ်ခွင့်၊ အမျိုးသားရေး တို့အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ရင်း စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့၏ ငရဲခန်းများတွင် ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရသော ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ အလုပ်သမား လယ်သမား လူမျိုးစုများ၏ အရေအတွက်ကလည်း မြန်မာပြည်တွင် ဒု နှင့် ဒေး ရှိနေပါသည်။ ဤအဖြစ်ဆိုး စနစ်ဆိုးတို့အား ကြုံတွေ့ သိရှိ ခံစား တွေ့ထိခဲ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း အနေနှင့် အခွင့်အလမ်းရလျှင် ရသလို တနည်းမဟုတ်တနည်းဖြင့် အဖြစ်အပျက် အနိဋ္ဌာရုံများကို ပြည်သူသို့ တင်ပြ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် တာဝန် ရှိနေသည်ကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါသည်။ မျက်မှန်တင်ဦးကြီးတို့၏ ခေတ်ကအသုံးပြုခဲ့သော ရက်စက်ယုတ်မာ လူမဆန်အောင်ညှင်းပန်း နှိပ်စက် နည်းမျိုးစုံရှိသလို၊ ဗိုလ်ခင်ညွန့်၏ MI ခေတ်၊ ယခု ဗိုလ်မြင့်ဆွေတို့၏ MI ခေတ်တို့တွင် ၄င်း ရက်စက်မှုမျိုး စုံသည် သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ရှိနေမည် ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်ရှိ မှတ်တမ်းတင်သူများ ရှိနေသရွေ့ မည်သည့်ခေတ်က ရက်စက်မှု အပေါင်းတွင် သရဖူဆောင်းမည် ဆိုတာကိုတော့ စာရှုသူ ပြည်သူများ ကပင် ဆုံးဖြတ်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တတိယအချက်မှာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ ဤမျှလောက်တန်ခိုး အာဏာ အရှိန်အ၀ါကြီး ရခြင်းမှာလည်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်၏ အစိပ်အပိုင်းတခုသာ ဖြစ်သည့် စစ်ထောက်လှမ်းရေး တို့၏ အဓိကတာဝန်မှာ စစ်မြေပြင်၌ တကယ်ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရမည့် တဖက် ရန်သူ၏ နည်းပရိယာယ်၊ လူသူ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း စသည့် စစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းများကိုသာ ထောက်လှမ်း စုဆောင်းကြရပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တို့တွင်စစ် ထောက်လှမ်းရေးတို့ လုံးဝ မပါဝင် မစွက်ဖက်ရပါ။ သို့သော် ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွင်ကား စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး ကြီး သက်ဆိုးရှည်ဖို့ အတွက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့သည် စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ကို အဓိကဒေါက်တိုင် အဖြစ် ဆက်လက် သုံးစွဲနေဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စတုတ္တအချက်မှာ ကျနော်တို့ ပြည်သူ တရပ်လုံး စွဲစွဲမြဲမြဲ ယုံကြည်ထားရမည့် အချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်မှာ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ လက်ကိုင်ဒုတ် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ နှင့် ထောက်လှမ်းရေးတို့သည် နောက်ဆုံးတွင် မည်သူမှ ဇာတ်သိမ်းမကောင်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးကို အသက်သွင်းပြီး လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သူ ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင် သိမ်ငယ်စွာ နှင့် ဇာတ်သိမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ထို့အတူ လက်ရှိ ထောက်လှမ်းရေးချုပ် ဗိုလ်မြင့်ဆွေ သည်လည်း ဇာတ်သိမ်းကောင်း မည်မဟုတ်ပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတို့ သွားရာလမ်းက မြန်မာ့ သမိုင်းတွင် လယ်ပြင်၌ ဆင်သွားသကဲ့သို့ ထင်ရှား နေပါပြီ။
ပဉ္စမအချက် တင်ပြလိုသည်မှာ ပြည်သူတိုင်းက လိုလားတောင့်တနေသော လူမှု လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးများကို အာမခံသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်ရှင်သန် ထွန်းကားလာမှသာ တိုင်းပြည်၏ အနိဋ္ဌာရုံ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် ပြည်သူ အပေါင်း အနေနှင့် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ နှင့် အတူ အုတ်တချပ် သဲတပွင့်ဖြစ်စေ မိမိတို့ကျရာ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လှုပ်ရှားပြီး ဒီမိုကရေစီ ဗိမာန်ကြီးကို ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ တည်ဆောက်ကြဖို့ အဓိဌာန်ပြုကြပါစို့လို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
နောက်ဆုံးတင်ပြလိုသည့်အချက်မှာ ကျနော်၏ ခံစားချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
“သပြေတခက် ကြွေရက်ကယ်စောတဲ့ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်မြင့်ထူးရေ- သူငယ်ချင်းမှာတဲ့အတိုင်း ဒီမိုကရေစီ ရတဲ့ အချိန်မှာ ဒို့တတွေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ သပြေခက်နဲ့ ရေစင်ခွက်ကို ကိုင်စွဲပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ ကြွေလွင့်သွားကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်း အာဇာနည်အပေါင်းကို အမျှ ပေးဝေပါမယ်လို့ ”